ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ Social Media အခနျးကဏ်ဍ (၂) ~ ရွှေးကောက်ပွဲနှင့် Social Media အခန်းကဏ္ဍ (၂)
Posted by Admin in အထွေထွေ ဗဟုသုတ
မှတျမိပါသေးသညျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ စကျတငျဘာလ ၂၆ ရကျနကေ့ Long Island ရှိ Hofstra University မှာ အမရေိကနျသမ်မတလောငျး ၂ ဦး စကားစဈထိုးပှဲ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ့အကွောငျး။ အဆိုပါ စကားစဈထိုးပှဲကို ရုပျသံမြား အငျတာနကျဝကျဘျဆိုကျမြားမှတဆငျ့ ထုတျလှငျ့ပွသခဲ့ကွပွီး အထူးခွားဆုံး စကားစဈထိုးပှဲဖွဈလာခဲ့သညျ။ မညျသညျ့အခါနှငျ့မြှမတူပဲ ၎င်းငျးတို့နှဈဦး အပွနျအလှနျဆှေးနှေးငွငျးခုံခဲ့ကွသညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို လူအမြားက အမြားဆုံး အှနျလိုငျးမှတဆငျ့ အကွိတျအနယျပွနျလညျဆှေးနှေးခဲ့ကွသောကွောငျ့ဖွဈလသေညျ။
ဤမြှမကသေး။ အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲကာလတဈလြှောကျ Twitter၊ Facebook၊ Instagram နှငျ့ တခွားသော လူမှုကှနျယကျဝကျဘျဆိုကျမြားတှငျလညျး သမ်မတလောငျးတို့ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ထောကျခံမှု၊ ကနျ့ကှကျမှုမြားနှငျ့ သောသောညံခဲ့သညျ။ ဒီကွားထဲ ပှဲအပွီးတှငျ ဟီလာရီ၏ နညျးပညာအဖှဲ့က အဆိုပါညပှဲတှငျ ဟီလာရီက ထရမျ့ပျကို အသာစီးရခဲ့ကွောငျး ဟီလာရီ့ကိုထောကျခံသူမြားကို အှနျလိုငျးပလကျဖောငျးတှမှော ပွောဆိုကွဖို့ အီးမေးလျပို့ခဲ့သလို ထရမျ့ပျ၏ အဖှဲ့ကလညျး Snapchat ကနတေဆငျ့ တုနျ့ပွနျခဲ့ကွောငျး ကွားရပွနျသညျ။
နိုငျငံတကာမီဒီယာမြား၏ သတငျးဖျောပွခကျြမြားအရ နိုငျငံအလိုကျ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို လူမှုကှနျယကျမြား အငျတာနကျမြားမှ ရှာဖှမှေုမြား၊ လလေ့ာမှုမြား အဆမတနျပိုမိုမွငျ့မားလာနသေညျဆို၏။ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ နောကျဆုံး ရှေးကောကျပှဲ ၃ ကွိမျဖွဈသညျ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂ နှငျ့ ၂၀၁၆ တို့တှငျ သမ်မတအိုဘားမားနှငျ့ ထရမျ့ပျတို့အနဖွေငျ့ လူမှုကှနျယကျကမျပိနျးမြားကို ထိထိရောကျရောကျအသုံးခနြိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ ရလဒျကောငျးမြား ရရှိခဲ့ကွသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ဆယျစုနှဈတဈခုခနျ့ကို လှမျးမြှျောကွညျ့လြှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ တိုငျးပွညျတဈခု၏ အနာဂတျကို အဆုံးအဖွတျပေးမညျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျမြားကို အကြိုးသကျရောကျစလေောကျသညျ့ အရာမြားတော့ မဟုတျခဲ့ပေ။ သို့သျောလညျး လူမှုကှနျယကျမြား၏ ပေါကျကှဲအားနှငျ့ ထိရောကျမှုနှုနျးထားမှာ ကွောကျခမနျးလိလိ တိုးတကျလာနသေောကွောငျ့ ယနခေ့တျေတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားမြား၏ စညျးရုံးရေး လှုပျရှားမှုမြား၌ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ သိသာထငျရှားသညျ့ အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျနပွေီဖွဈသညျ။
ဥပမာအနဖွေငျ့ ယခုလာမညျ့ ၂၀၁၆ အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကိုယျစားလှယျလောငျးအသီးသီးက မဲဆှယျစညျးရုံးကွရာတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှအေနဖွေငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားကို အရငျကထကျကို ပိုမိုအားကိုးလှနျးကွသညျဟုပငျ မီဒီယာတှကေဝဖေနျကွသညျ အထိဖွဈခဲ့သညျ။ သူတို့ မညျကဲ့သို့ Campaign မြား လုပျသညျ၊ မညျကဲ့သို့ အသုံးခနြကွေသညျ၊ မညျသညျ့အခကျြအလကျမြားကို လူထုထံခပြွနကွေသညျ ဆိုသညျမြားကို တခုတျတရပွောဆိုဆှေးနှေးနရေသညျအထိပငျ။
Twitter တှငျ ဟီလာရီ၏ ကမျပိနျးကို Follow ထားသူ ၉ သနျးကြျောရှိပွီး Facebook တှငျမူ ၆ သနျးကြျောရှိလသေညျ။ ထရမျ့ပျမှာမူ လူမှုကှနျယကျတှငျ ဟီလာရီကို အပွတျအသတျအသာခဲ့ပွီး Twitter တှငျ Follower ၁၁ သနျးကြျောနှငျ့ Facebook တှငျလညျး Like ၁၁ သနျးနီးပါးရှိခဲ့သညျ။ ယငျးအတှကျ ၂ ဘကျစလုံးမှ ငှကွေေးအပွမောကျအမြား အကုနျအကခြံ၍ စနဈတကမြဟာဗြူဟာမြားဖွငျ့ ပွငျဆငျဆောငျရှကျနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ နောကျဆုံးရှေးကောကျပှဲရလဒျ ထှကျလာခြိနျတှငျလညျး ထရမျ့ပျသညျ ဟီလာရီကို နောကျကောကျခနြိုငျခဲ့လသေညျ။
ဤသညျမှာလညျး တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ ရစေီးတဈခုဖွဈလာနခွေငျးကွောငျ့ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံနိုငျငံသညျလညျး အဆိုပါရစေီးထဲတှငျ မြောပါခဲ့သညျမှာ ၂၀၁၆ ရှေးကောကျပှဲကို ကွညျ့လြှငျ သိသာနိုငျလသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကိုယျ့ထကျ နညျးပညာနှငျ့ ဆကျသှယျရေးစနဈပိုမိုအဆငျ့မွငျ့သညျ့ နိုငျငံမြားတှငျ တခုတျတရကို အရေးစိုကျကွိုးပမျးနကွေသညျမှာ မဆနျးလှပေ။
မွနျမာပွညျတှငျးတှငျလဲ ယခုဆိုပါက မိုဘိုငျးဆကျသှယျရေးစနဈမြား အထိုကျအလြောကျ ပိုမိုကောငျးမှနျလာနသေညျ။ အငျတာနကျကိုလညျး ယခငျကထကျ ပိုမိုတှငျကယျြစှာ သုံးစှဲလာကွသညျ့အခြိနျတှငျ Social Media မြား၏ အခနျးကဏ်ဍကလညျး အလိုလိုရှသေို့ တိုးထှကျလာခဲ့သညျ။ သာမနျလူမြားအနဖွေငျ့ မပွောပါနှငျ့။ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ ထိပျတနျး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ လှတျတျောအမတျမြားပငျလြှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားပျေါတှငျ ပြျောမှနေ့ကွေသညျကို မွငျတှနေ့ရေသညျ။
အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျပါက အငျတာနကျသုံးစှဲသူအရအေတှကျ နညျးပါးသေးသော မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြား၏ အခနျးကဏ်ဍသညျ အတနျငယျနညျးပါးသညျဟု ထငျရသျောလညျး လကျရှိလူဦးရေ၏ ထကျဝကျနီးပါးခနျ့ အငျတာနကျသုံးစှဲနကွေသဖွငျ့ တိုငျးပွညျအနအေထားဖွငျ့ ကွညျ့လြှငျမူ နညျးသညျဟု မဆိုသာ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးတှငျလညျး တရားဝငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးခရီးစဉျမြားအပွငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားမှတဆငျ့ စှဲဆောငျစညျးရုံးမှုမြားကို ထငျရှာစှာ မွငျတှခေဲ့ရပွီး လူထု၏ တကျကွှသော တုနျ့ပွနျမှုကိုလညျး မွငျခဲ့ရသညျ။ ရှလေ့ာမညျ့ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲအတှကျလညျး ပို၍ထိရောကျသညျ့ ပွငျဆငျမှုမြား ပွုလုပျထားရနျလိုအပျပမေညျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက နိုငျငံရေးပါတီကွီးမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားတဈခြို့က ကွိုတငျမရညျရှယျထားသျောလညျး မဲဆှယျစညျးရုံးမှုဆနျဆနျလှုပျရှားမှုမြား၊ ဆှဲဆောငျမှုမြားကို လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ထောကျခံသံမြား၊ ကနျ့ကှကျသံမြား၊ အငွငျးအခုံမြားဖွငျ့ စညျစညျကားကားရှိခဲ့လသေညျ။ သို့သျော ယခု ၂၀၁၈ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲတှငျမူ ရညျရှယျခကျြအပွညျ့ဖွငျ့ စှဲဆောငျစညျးရုံနိုငျဖို့ လိုအပျလာသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲကာလမြားက ပါတီမြား၏ ဆိုရှယျမီဒီယာလှုပျရှားမှုမြားသညျ သကျဆိုငျရာပါတီတဈခငျြးစီအတှငျးမှာပငျ တကြောငျးတဂါထာဆနျဆနျလှုပျရှားခဲ့ကွပွီး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စကားစုမြား၊ ခှနျအားဖွညျ့စကားစုမြား၊ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး၏ သတငျးအခကျြအလကျမြား၊ Landscape မြား၊ Infograph မြား မတှရှေိ့ခဲ့ရသညျကတော့ အမှနျပငျ။ တနျဖိုးနညျးနညျးဖွငျ့ ထိရောကျမှုရှိသော အခှငျ့အရေးကို လကျလှတျခံခဲ့ကွသညျ။ ယခုလာမညျ့ ၂၀၁၈ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲတှငျမူ လူမှုကှနျယကျကဏ်ဍသညျ ယခုထကျပိုမို ရှရေ့ောကျလာမညျမှာ မွကွေီးလကျခတျမလှဲပငျ။
ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲဖွဈသညျ့အတှကျ လူထုစိတျဝငျစားမှုအားနညျးနခွေငျးကို အပွောငျးအလလဲပွုလုပျရနျ လူမှုကှနျယကျမှတဆငျ့ ကွိုးပမျးခွငျးသညျ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးဖွဈပမေလိမျ့မညျ။ သကျဆိုငျရာ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမညျ့ ဒသေမှ ဒသေခံမဲ ဆန်ဒရှငျမြားထံ ရိုကျရိုကျရညျရှယျ၍ စညျးရုံးမှုမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ လူမှုကှနျယကျကို ထိထိရောကျရောကျ အသုံးခနြိုငျရနျ လိုအပျလှပသေညျ။
ပွီးစီခဲ့သော အမရေိကနျရှေးကောကျပှဲမြားနှငျ့ ဥရောပရှေးကောကျပှဲမြားတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာနိုငျငံရေးကို နားလညျသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ရှရေ့ောကျလာကွပွီး သူတို့၏ Campaign မြား အလုပျဖွဈမဖွဈကလညျး သူတို့၏ မဲအရအေတှကျအပျေါ သကျရောကျမှုမြားလာခဲ့သညျ။
မီဒီယာမြားက ရှေးကောကျပှဲဝငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဆိုရှယျမီဒီယာနိုငျငံရေးသမားမြားဟု ပွောဆိုကွသညျကိုလညျး အပွဈတော့မဆိုရာ။
ယနခေ့တျေတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ တိုငျးပွညျတဈခု၏ အနာဂတျကို အဆုံးအဖွတျပေးမညျ့ အရာမြား မဟုတျဟု တဈထဈခြ ပွောဆို၍ မရတော့ခြေ။ လူမှုကှနျယကျမြားသညျ တိုငျးပွညျတိုငျ၏ ကိစ်စရပျတိုငျးကို တဈနညျးမဟုတျတဈနညျး ပါဝငျပတျသကျနကွေပွီဖွဈသညျ။ သို့မဟုတျ တဖွေးဖွေးနှငျ့ ပို၍ပို၍ အရေးပါသော အခွအေနမြေားကိုတော့ ဖနျတီးယူလာနကွေပွီဖွဈသညျ။ တဈခြိနျမဟုတျ တဈခြိနျတှငျတော့ သူတို့သညျပငျ ရှေးကောကျပှဲရလဒျမြား ဖွဈမလာဟု ပွော၍မရပေ။ ထို့ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအနဖွေငျ့ ယငျးအခှငျ့အရေးကို ဆုပျကိုငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားကွသငျ့သညျ။
မှတ်မိပါသေးသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က Long Island ရှိ Hofstra University မှာ အမေရိကန်သမ္မတလောင်း ၂ ဦး စကားစစ်ထိုးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အကြောင်း။ အဆိုပါ စကားစစ်ထိုးပွဲကို ရုပ်သံများ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ကြပြီး အထူးခြားဆုံး စကားစစ်ထိုးပွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ မည်သည့်အခါနှင့်မျှမတူပဲ ၎င်းတို့နှစ်ဦး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ကြသည့် အကြောင်းအရာများကို လူအများက အများဆုံး အွန်လိုင်းမှတဆင့် အကြိတ်အနယ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
ဤမျှမကသေး။ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲကာလတစ်လျှောက် Twitter၊ Facebook၊ Instagram နှင့် တခြားသော လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လည်း သမ္မတလောင်းတို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ခံမှု၊ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် သောသောညံခဲ့သည်။ ဒီကြားထဲ ပွဲအပြီးတွင် ဟီလာရီ၏ နည်းပညာအဖွဲ့က အဆိုပါညပွဲတွင် ဟီလာရီက ထရမ့်ပ်ကို အသာစီးရခဲ့ကြောင်း ဟီလာရီ့ကိုထောက်ခံသူများကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွေမှာ ပြောဆိုကြဖို့ အီးမေးလ်ပို့ခဲ့သလို ထရမ့်ပ်၏ အဖွဲ့ကလည်း Snapchat ကနေတဆင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ကြားရပြန်သည်။
နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၏ သတင်းဖော်ပြချက်များအရ နိုင်ငံအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ယက်များ အင်တာနက်များမှ ရှာဖွေမှုများ၊ လေ့လာမှုများ အဆမတန်ပိုမိုမြင့်မားလာနေသည်ဆို၏။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ဖြစ်သည့် ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် သမ္မတအိုဘားမားနှင့် ထရမ့်ပ်တို့အနေဖြင့် လူမှုကွန်ယက်ကမ်ပိန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လျှင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို အကျိုးသက်ရောက်စေလောက်သည့် အရာများတော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း လူမှုကွန်ယက်များ၏ ပေါက်ကွဲအားနှင့် ထိရောက်မှုနှုန်းထားမှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးတက်လာနေသောကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၏ စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုများ၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် သိသာထင်ရှားသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေဖြင့် ယခုလာမည့် ၂၀၁၆ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသီးသီးက မဲဆွယ်စည်းရုံးကြရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို အရင်ကထက်ကို ပိုမိုအားကိုးလွန်းကြသည်ဟုပင် မီဒီယာတွေကဝေဖန်ကြသည် အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ မည်ကဲ့သို့ Campaign များ လုပ်သည်၊ မည်ကဲ့သို့ အသုံးချနေကြသည်၊ မည်သည့်အချက်အလက်များကို လူထုထံချပြနေကြသည် ဆိုသည်များကို တခုတ်တရပြောဆိုဆွေးနွေးနေရသည်အထိပင်။
Twitter တွင် ဟီလာရီ၏ ကမ်ပိန်းကို Follow ထားသူ ၉ သန်းကျော်ရှိပြီး Facebook တွင်မူ ၆ သန်းကျော်ရှိလေသည်။ ထရမ့်ပ်မှာမူ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဟီလာရီကို အပြတ်အသတ်အသာခဲ့ပြီး Twitter တွင် Follower ၁၁ သန်းကျော်နှင့် Facebook တွင်လည်း Like ၁၁ သန်းနီးပါးရှိခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် ၂ ဘက်စလုံးမှ ငွေကြေးအပြေမာက်အများ အကုန်အကျခံ၍ စနစ်တကျမဟာဗျူဟာများဖြင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ထွက်လာချိန်တွင်လည်း ထရမ့်ပ်သည် ဟီလာရီကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့လေသည်။
ဤသည်မှာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရေစီးတစ်ခုဖြစ်လာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသည်လည်း အဆိုပါရေစီးထဲတွင် မျောပါခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြည့်လျှင် သိသာနိုင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ထက် နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် နိုင်ငံများတွင် တခုတ်တရကို အရေးစိုက်ကြိုးပမ်းနေကြသည်မှာ မဆန်းလှပေ။
မြန်မာပြည်တွင်းတွင်လဲ ယခုဆိုပါက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ အထိုက်အလျောက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနေသည်။ အင်တာနက်ကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလာကြသည့်အချိန်တွင် Social Media များ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အလိုလိုရှေ့သို့ တိုးထွက်လာခဲ့သည်။ သာမန်လူများအနေဖြင့် မပြောပါနှင့်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များပင်လျှင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင် ပျော်မွေ့နေကြသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အင်တာနက်သုံးစွဲသူအရေအတွက် နည်းပါးသေးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အတန်ငယ်နည်းပါးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း လက်ရှိလူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါးခန့် အင်တာနက်သုံးစွဲနေကြသဖြင့် တိုင်းပြည်အနေအထားဖြင့် ကြည့်လျှင်မူ နည်းသည်ဟု မဆိုသာ။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်လည်း တရားဝင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များအပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှတဆင့် စွဲဆောင်စည်းရုံးမှုများကို ထင်ရှာစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး လူထု၏ တက်ကြွသော တုန့်ပြန်မှုကိုလည်း မြင်ခဲ့ရသည်။ ရှေ့လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း ပို၍ထိရောက်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပေမည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ချို့က ကြိုတင်မရည်ရွယ်ထားသော်လည်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆန်ဆန်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ထောက်ခံသံများ၊ ကန့်ကွက်သံများ၊ အငြင်းအခုံများဖြင့် စည်စည်ကားကားရှိခဲ့လေသည်။ သို့သော် ယခု ၂၀၁၈ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်ဖြင့် စွဲဆောင်စည်းရုံနိုင်ဖို့ လိုအပ်လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလများက ပါတီများ၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာပါတီတစ်ချင်းစီအတွင်းမှာပင် တကျောင်းတဂါထာဆန်ဆန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စကားစုများ၊ ခွန်အားဖြည့်စကားစုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ Landscape များ၊ Infograph များ မတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ တန်ဖိုးနည်းနည်းဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသော အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ခံခဲ့ကြသည်။ ယခုလာမည့် ၂၀၁၈ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ လူမှုကွန်ယက်ကဏ္ဍသည် ယခုထက်ပိုမို ရှေ့ရောက်လာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည့်အတွက် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေခြင်းကို အပြောင်းအလလဲပြုလုပ်ရန် လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပေမလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် ဒေသမှ ဒေသခံမဲ ဆန္ဒရှင်များထံ ရိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ စည်းရုံးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုကွန်ယက်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်လှပေသည်။
ပြီးစီခဲ့သော အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ဥရောပရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာနိုင်ငံရေးကို နားလည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရှေ့ရောက်လာကြပြီး သူတို့၏ Campaign များ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကလည်း သူတို့၏ မဲအရေအတွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုများလာခဲ့သည်။
မီဒီယာများက ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနိုင်ငံရေးသမားများဟု ပြောဆိုကြသည်ကိုလည်း အပြစ်တော့မဆိုရာ။
ယနေ့ခေတ်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် အရာများ မဟုတ်ဟု တစ်ထစ်ချ ပြောဆို၍ မရတော့ချေ။ လူမှုကွန်ယက်များသည် တိုင်းပြည်တိုင်၏ ကိစ္စရပ်တိုင်းကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် တဖြေးဖြေးနှင့် ပို၍ပို၍ အရေးပါသော အခြေအနေများကိုတော့ ဖန်တီးယူလာနေကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တွင်တော့ သူတို့သည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ဖြစ်မလာဟု ပြော၍မရပေ။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် ယင်းအခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြသင့်သည်။
Facebook ကို စှနျ့ခှာသငျ့ပွီလား (၂) ~ Facebook ကို စွန့်ခွာသင့်ပြီလား (၂)
ဖစျေ့ဘုတျ ကို စှနျ့ခှာသငျ့ပွီလား
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးမှာပဲ လူမှုကှနျယကျ မီဒီယာကွီး ဖစျေ့ဘုတျက သူတို့ရဲ့ နညျးပညာလုံခွုံရေးစညျး ကြိုးပေါကျသှားတာမို့ အသုံးပွုသူ သနျး ၅၀ လောကျရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာအခကျြအလကျတှေ ပေါကျကွားသှားတယျလို့ ဝနျခံလိုကျပါတယျ။
ဒီပွဿနာဟာ မွနျမာပွညျမှာလဲ ဖွဈခဲ့ပွီးတော့ တခြို့သော အသုံးပွုသူတှရေဲ့ အကောငျ့တှဟော အလိုအလြောကျ Log out ဖွဈကုနျကွတာမြိုးတှေ ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ဖစျေ့ဘုတျရဲ့ ၁၄ နှဈတာသမိုငျးမှာ အဆိုးရှားဆုံး လုံခွုံရေးကြိုးပေါကျမှုဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာ ၆ လတာ ကာလအတှငျးမှာ ဖစျေ့ဘုတျကုမ်ပဏီ တကျခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အခကျြအလကျပေါကျကွားမှု ပွဿနာဖွဈပါတယျ။ ပထမတဈကွိမျတုနျးကလညျး Cambridge Analytica အရှုပျတျောပုံကွောငျ့ ဖစျေ့ဘုတျအနနေဲ့ နာမညျပကျြစရာ အရှကျရစရာကိစ်စတှေ ဖွဈခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီတဈကွိမျတုနျးကတော့ ဖစျေ့ဘုတျကိုယျတိုငျ အသုံးပွုသူတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အသုံးခခြှငျ့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ မတျလတှတေုနျးကလညျး Tesla နဲ့ Mozilla တိုလို နာမညျကြျော နညျးပညာလုပျငနျးကွီးတှကေအစ Cambridge Analytica အရှုပျတျောပုံနဲ့ ပတျသတျပွီး ဖစျေ့ဘုတျကို သပိတျမှောကျခဲ့ကွပါတယျ။ Tesla ရဲ့ အကွီးအကဲ Elon Musk ဟာဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ ကားကုမ်ပဏီ Tesla နဲ့ အာကာသသယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး SpaceX တို့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ page တှကေို ဖကျြခလြိုကျတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဖစျေ့ဘုတျ ဟာ သနျးဆယျနဲ့ခြီ Like လုပျထားတဲ့ Page တဈခြို့ကို ဆုံးရှုံးသှားပါတယျ။
Mozilla ကတော့ သူ့ Browser ပျေါက အသုံးပွုသူတှကေို ဖစျေ့ဘုတျ ရဲ့ ကွျောငွာတှေ မမွငျရအောငျ ပိတျပငျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဂြာမနီအခွစေိုကျ Commerzbank နဲ့ အီလကျထရှနျနဈပစ်စညျးထုတျလုပျသူ Sonos တို့ကလညျး ဖစျေ့ဘုတျမှာ ကွျောငွာထညျ့သှငျးမှုကို ရပျနားခဲ့ပါတယျ။
ဒါနဲ့တငျမပွီးသေးပါဘူး WhatsApp ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Brian Acton ကလညျး #deleteဖစျေ့ဘုတျ ဆိုတဲ့ Campaign ကို စတငျခဲ့ပွီး ဒါဟာ ဖစျေ့ဘုတျကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျလို့ တိုကျတှနျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ မွနျမာပွညျမှာတော့ တပျခြုပျရဲ့ ဖေ့ဈဘုတျစာမကျြနှာ ပိတျသိမျးခံရခြိနျမှာ ဖစျေ့ဘုတျကို စှနျ့ခှာသှားသူတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
Cambridge Analytica ရဲ့ အခကျြအလကျအလှဲသုံးစားလုပျမှုပွဿနာအပွငျ နိုငျငံတကာ ပွဿနာတှမှော ဖစျေ့ဘုတျရဲ့ ရပျတညျမှုသဘောထားတှကွေောငျ့ နိုငျငံတကာ ဖစျေ့ဘုတျသုံးစှဲသူတှကေတော့ ဖစျေ့ဘုတျအပျေါ ယုံကွညျမှုကဆြငျးလာပွီးတော့ ဆကျသုံးသငျ့မသုံးသငျ့ ဝိဝါဒကှဲစရာအခွအေနဖွေဈလာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအရှုပျတျောပုံ ပွဿနာတှမေဖွဈပှားခငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောကျတိုဘာလောကျကတညျးက စာရေးဆရာ စကော့တျ ဂယျလိုဝေးက သူ့ရဲ့ The Four ဆိုတဲ့စာအုပျမှာ ဖစျေ့ဘုတျ ရဲ့ ဒီလို အခကျြအလကျအလှဲသုံးစားမှုတှရှေိနတေယျဆိုတာကို ကွိုတငျသတိပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။
“လူမှုကှနျယကျ ကုမ်ပဏီတဈခုသညျ သငျ့ကလေးငယျ၏ ထောငျပေါငျးမြားစှာသော ဓာတျပုံမြားကို ဆနျးစဈ စဈဆေးသညျ၊ သငျ့ဖုနျးကို Activate လုပျ၍ ခြောငျးမွောငျးခိုးယူနားဆငျနိုငျသညျ့ ဝတ်ထုပစ်စညျးတဈခုသဖှယျအသုံးခသြညျ၊ ယငျးနောကျ အဆိုပါ အခကျြအလကျမြားကို Fortune 500 စာရငျးဝငျကုမ်ပဏီမြားထံ ရောငျးခလြိုကျလသေညျ။ …. ကြှနျုပျတို့သညျ မိမိတို့၏ ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျမြားကို ခပျလှယျလှယျပငျ သတိမမူပဲ ပဈထားမိနကွေသျောလညျး ၎င်းငျးကုမ်ပဏီမြားကမူ ၎င်းငျးတို့အကြိုးအမွတျအတှကျ ယငျးအခကျြအလကျမြားကို ရယူအသုံးခနြကွေသညျ။” ဆိုပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ၆ လကြျောကတညျးက ဂယျလိုဝေးက ပွငျးပွငျးထနျထနျထုတျဖျောဝဖေနျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ဝဖေနျမှုတှေ မှနျကနျတယျဆိုတာကိုတော့ လူတှကေ ခုခြိနျမှ သတိထားမိလာကွတာပါ။
အထူးသဖွငျ့ Cambridge Analytica ရဲ့အခကျြအလကျ အလှဲသုံးစားမှု အရှုပျတျောပုံ ပျါပေါကျလာတဲ့အခြိနျမှာမှဖွဈပါတယျ။ Cambridge Analytica ဟာ ၂၀၁၆ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲအပါအဝငျ ဖောကျသညျတဈခြို့ရဲ့ ကိုယျကြိုးအတှကျ အသုံးခဖြို့ ဖစျေ့ဘုတျ သုံးစှဲသူ သနျး ၅၀ ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အလှဲသုံးစားပွုလုပျခဲ့တာပါ။ ခုတဈခါထပျဖွဈတဲ့ လုံခွုံရေးစညျးကြိုးပေါကျမှုနဲ့ ထပျမံပေါငျးလိုကျမယျဆိုရငျ ဖစျေ့ဘုတျဟာ တဈနှဈထဲမှာတငျ အသုံးပွုသူ သနျး ၁၀၀ ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အလှဲသုံးစားပွုလုပျမယျ့သူတှဆေီ ရောကျရှိသှားစခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီကနေ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာ ပမာဏအထိ အခကျြအလကျတှေ ပေါကျကွားသှားတယျဆိုတာ ဘယျသူမှ အတိအကြ မသိနိုငျသေးပါဘူး။
တကယျတမျးအားဖွငျ့ ဒီလိုဖွဈပကျြရခွငျးဟာ ဖစျေ့ဘုတျ ရဲ့ အခကျြအလကျအသေးစိတျ မှတျတမျးတငျမှုကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဖစျေ့ဘုတျ ဟာ အသုံးပွုသူတဈယောကျရဲ့ အမညျရငျး၊ မှေးသက်ကရာဇျစတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှအေပါအဝငျ အခကျြအလကျအမြိုးအစား ၇၁ မြိုးအထိ သတျမှတျပွီး ခှဲခွားမှတျတမျးတငျထားလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီအမြိုးအစားခှဲခွား မှတျတမျးတငျမှုမှာ Chat history တှေ၊ သှားခဲ့တဲ့ Check-in ဝငျခဲ့တဲ့ နရောတှေ၊ ဝါသနာ၊ အလအေ့ကငျြ့၊ ကိုးကှယျယုံကွညျမှုနဲ့ နိုငျငံရေးအမွငျစတာတှပေါဝငျပါတယျ။ ကာလရှညျကွာလှနျးသှားလို့ မရှိတော့ဘူးလို့ မမှတျယူပါနဲ့။ ဖစျေ့ဘုတျ ဟာ အသေးအမှားအသေးစိတျအခကျြအလကျလေးတှကေအစ မှတျတမျးတငျထားတာပါ။ ဖကျြခလြိုကျတဲ့ Chat recoed တှနေဲ့ Search history တှကေ အစပါဝငျပါတယျ။ ဘယျလို Device တှေ သုံးတယျ၊ ဘယျလို Operation System တှေ သုံးတယျ၊ ဘယျ Browser တှေ အမြားဆုံး အသုံးပွုတယျဆိုတာမြိုးနဲ့ ခရီးသှားရငျ ဘာတှလေုပျတတျတယျဆိုတာမြိုးတှကေိုလညျး သူတို့သိရှိနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဘယျလို Page တှကေို Like လုပျထားတယျ၊ ဘယျလို Status တှေ တငျလရှေိ့တယျ၊ သူငယျခငျြး မြားတယျ နညျးတယျ၊ ဘယျလိုလူမြိုးကို သူငယျခငျြးအဖွဈ ထားလရှေိ့တယျ၊ အလုပျအကိုငျအခွအေနဘေယျလိုရှိတယျနဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးမှာ ဘယျအခွအေနရှေိတယျဆိုတာတှကေို မှတျတမျးတငျထားတာကွောငျ့ သူတို့နဲ့ ကိုကျညီမယျ့ ကွျောငွာတှကေို ကိုကျညှိပေးပို့နိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
ဒီလို အသေးစိတျ မှတျတမျးတငျတတျတဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ ဆီကနေ အခကျြအလကျတှေ ပေါကျကွားသှားတာဖွဈတာကွောငျ့ ယခုပွဿနာတှမှော လူတဈဦးခငျြးစီကနေ ဘယျလောကျ အခကျြအလကျတှပေေါကျကွားသှားသလဲဆိုတာကို ကမ်ဘာတဈဝှမျးက အသုံးပွုသူတှကေ ဝိုငျးပွီးစိုးရိမျနကွေတာဖွဈပါတယျ။
နညျးပညာလောကမှာ ဒီလိုပွဿနာမြိုးတှကေ ခုမှဖွဈပျေါလာတာမဟုတျပဲနဲ့ LinkedIn နဲ့ လူမှုရေးဖောကျပွနျသူတှအေသုံးပွုတဲ့ Ashley Madison တို့လို လူမှုကှနျယကျဝကျဘျဆိုကျမြိုးတှလေညျး အခကျြအလကျပေါကျကွားမှုမြိုးတှေ ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး အသုံးပွုသူတှေ တှေးနကွေသလိုမြိုး တကယျကို ဖစျေ့ဘုတျ ရဲ့ အဆုံးသတျအခြိနျကို ရောကျပွီလား? ဖစျေ့ဘုတျ ကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျရောကျပွီလား? ဆိုတာကတော့ ဖွဖေို့ ခကျနဆေဲဖွဈပါတယျ။
Tesla နဲ့ Mozilla တို့ကိုယျတိုငျ ဖစျေ့ဘုတျ ကို သပိတျမှောကျခဲ့ကွပမေယျ့ ဒါဟာ ယာယီသာဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ WhatsApp ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Brian Acton က ဖစျေ့ဘုတျ ကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျလို့ ဆိုခဲ့ပမေယျ့ ဖစျေ့ဘုတျ ကပိုငျဆိုငျတဲ့ Instagram ကိုတော့ သူဟာ ခုထိ ဆကျသုံးနခေဲ့ပါတယျလို့ ဆိုပွနျပါတယျ။
ကမ်ဘာ့လူဦးရေ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောကျ အသုံးပွုနတေဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ ကို စှနျ့ခှာဖို့ဆိုတာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှအေတှကျရော သာမနျအသုံးပွုသူတှအေတှကျပါ ပွောသလောကျတော့ မလှယျလှတာမွငျရပါတယျ။ ဖစျေ့ဘုတျ ဟာ အသုံးပွုသူတှအေတှကျ တခွား Social Media တှထေကျ ပိုပွညျ့စုံတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ဖနျတီးပေးထားသလို ပိုကယျြပွနျ့တဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး ခြိတျဆကျပေးထားပါတယျ။ ဒီအခွအေနဟော ကွျောငွာရှငျတှအေတှကျလညျး လကျလှတျဖို့ ခကျခဲတဲ့ အခွအေနဖွေဈပါတယျ။
ဂယျလိုဝေးရဲ့ စာထဲမှာတော့ မီဒီယာတှေ၊ အစိုးရတှနေဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေိုယျတိုငျက ဖစျေ့ဘုတျ ကို အလိုလိုကျအကွိုကျဆောငျမွှောကျပငျ့ခဲ့ကွသလို အကနျ့အသတျမဲ့ အရငျးအနှီးတှနေဲ့ စိတျတိုငျးကြ ခယျြလှယျခှငျ့တှလေညျး ပေးမိခဲ့တာကွောငျ့ ဒီအခွအေနကေို ရောကျလာတာဖွဈပွီး ခုတော့ သူတို့ကို ဇာတျကွိုးသတျဖို့ ခကျနပွေီလို့ ဆိုပါတယျ။
ဂယျလိုဝေးပွောခဲ့သလိုပဲ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှသောမကပဲ လူတှကေိုယျတိုငျလညျး ဖစျေ့ဘုတျ ကို တကယျ့ဘဝရဲ့ တခွားမကျြနှာစာလို အသုံးခနြကွေတာကွောငျ့ စှနျ့ခှာဖို့ ခကျနလေိမျ့ဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲ လူမှုကွန်ယက် မီဒီယာကြီး ဖေ့စ်ဘုတ်က သူတို့ရဲ့ နည်းပညာလုံခြုံရေးစည်း ကျိုးပေါက်သွားတာမို့ အသုံးပြုသူ သန်း ၅၀ လောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားသွားတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာဟာ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ တချို့သော အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အကောင့်တွေဟာ အလိုအလျောက် Log out ဖြစ်ကုန်ကြတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ ၁၄ နှစ်တာသမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ၆ လတာ ကာလအတွင်းမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ကုမ္ပဏီ တက်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကလည်း Cambridge Analytica အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ်အနေနဲ့ နာမည်ပျက်စရာ အရှက်ရစရာကိစ္စတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တုန်းကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးချခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လတွေတုန်းကလည်း Tesla နဲ့ Mozilla တိုလို နာမည်ကျော် နည်းပညာလုပ်ငန်းကြီးတွေကအစ Cambridge Analytica အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Tesla ရဲ့ အကြီးအကဲ Elon Musk ဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကားကုမ္ပဏီ Tesla နဲ့ အာကာသသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း SpaceX တို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် page တွေကို ဖျက်ချလိုက်တဲ့အထိပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ် ဟာ သန်းဆယ်နဲ့ချီ Like လုပ်ထားတဲ့ Page တစ်ချို့ကို ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
Mozilla ကတော့ သူ့ Browser ပေါ်က အသုံးပြုသူတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ် ရဲ့ ကြော်ငြာတွေ မမြင်ရအောင် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျာမနီအခြေစိုက် Commerzbank နဲ့ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ Sonos တို့ကလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းမှုကို ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးပါဘူး WhatsApp ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Acton ကလည်း #deleteဖေ့စ်ဘုတ် ဆိုတဲ့ Campaign ကို စတင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်လို့ တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တပ်ချုပ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ ပိတ်သိမ်းခံရချိန်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို စွန့်ခွာသွားသူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
Cambridge Analytica ရဲ့ အချက်အလက်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုပြဿနာအပြင် နိုင်ငံတကာ ပြဿနာတွေမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ ရပ်တည်မှုသဘောထားတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်အပေါ် ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာပြီးတော့ ဆက်သုံးသင့်မသုံးသင့် ဝိဝါဒကွဲစရာအခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအရှုပ်တော်ပုံ ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလောက်ကတည်းက စာရေးဆရာ စကော့တ် ဂယ်လိုဝေးက သူ့ရဲ့ The Four ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ် ရဲ့ ဒီလို အချက်အလက်အလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်သတိပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
“လူမှုကွန်ယက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် သင့်ကလေးငယ်၏ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဓာတ်ပုံများကို ဆန်းစစ် စစ်ဆေးသည်၊ သင့်ဖုန်းကို Activate လုပ်၍ ချောင်းမြောင်းခိုးယူနားဆင်နိုင်သည့် ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုသဖွယ်အသုံးချသည်၊ ယင်းနောက် အဆိုပါ အချက်အလက်များကို Fortune 500 စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများထံ ရောင်းချလိုက်လေသည်။ …. ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ခပ်လွယ်လွယ်ပင် သတိမမူပဲ ပစ်ထားမိနေကြသေ်ာလည်း ၎င်းကုမ္ပဏီများကမူ ၎င်းတို့အကျိုးအမြတ်အတွက် ယင်းအချက်အလက်များကို ရယူအသုံးချနေကြသည်။” ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကျော်ကတည်းက ဂယ်လိုဝေးက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဝေဖန်မှုတွေ မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ လူတွေက ခုချိန်မှ သတိထားမိလာကြတာပါ။
အထူးသဖြင့် Cambridge Analytica ရဲ့အချက်အလက် အလွဲသုံးစားမှု အရှုပ်တော်ပုံ ပ်ါပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာမှဖြစ်ပါတယ်။ Cambridge Analytica ဟာ ၂၀၁၆ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင် ဖောက်သည်တစ်ချို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချဖို့ ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးစွဲသူ သန်း ၅၀ ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ခုတစ်ခါထပ်ဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်မှုနဲ့ ထပ်မံပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဖေ့စ်ဘုတ်ဟာ တစ်နှစ်ထဲမှာတင် အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀ ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မယ့်သူတွေဆီ ရောက်ရှိသွားစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကနေ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ပမာဏအထိ အချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိနိုင်သေးပါဘူး။
တကယ်တမ်းအားဖြင့် ဒီလိုဖြစ်ပျက်ရခြင်းဟာ ဖေ့စ်ဘုတ် ရဲ့ အချက်အလက်အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် ဟာ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ အမည်ရင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်စတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအပါအဝင် အချက်အလက်အမျိုးအစား ၇၁ မျိုးအထိ သတ်မှတ်ပြီး ခွဲခြားမှတ်တမ်းတင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးအစားခွဲခြား မှတ်တမ်းတင်မှုမှာ Chat history တွေ၊ သွားခဲ့တဲ့ Check-in ဝင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ၊ ဝါသနာ၊ အလေ့အကျင့်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာလွန်းသွားလို့ မရှိတော့ဘူးလို့ မမှတ်ယူပါနဲ့။ ဖေ့စ်ဘုတ် ဟာ အသေးအမွှားအသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေကအစ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ ဖျက်ချလိုက်တဲ့ Chat recoed တွေနဲ့ Search history တွေက အစပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်လို Device တွေ သုံးတယ်၊ ဘယ်လို Operation System တွေ သုံးတယ်၊ ဘယ် Browser တွေ အများဆုံး အသုံးပြုတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ခရီးသွားရင် ဘာတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း သူတို့သိရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘယ်လို Page တွေကို Like လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်လို Status တွေ တင်လေ့ရှိတယ်၊ သူငယ်ချင်း များတယ် နည်းတယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုးကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် ထားလေ့ရှိတယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဘယ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာကြောင့် သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ကြော်ငြာတွေကို ကိုက်ညှိပေးပို့နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်တတ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် ဆီကနေ အချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားသွားတာဖြစ်တာကြောင့် ယခုပြဿနာတွေမှာ လူတစ်ဦးချင်းစီကနေ ဘယ်လောက် အချက်အလက်တွေပေါက်ကြားသွားသလဲဆိုတာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အသုံးပြုသူတွေက ဝိုင်းပြီးစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာလောကမှာ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေက ခုမှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ LinkedIn နဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ Ashley Madison တို့လို လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မျိုးတွေလည်း အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အသုံးပြုသူတွေ တွေးနေကြသလိုမျိုး တကယ်ကို ဖေ့စ်ဘုတ် ရဲ့ အဆုံးသတ်အချိန်ကို ရောက်ပြီလား? ဖေ့စ်ဘုတ် ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလား? ဆိုတာကတော့ ဖြေဖို့ ခက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Tesla နဲ့ Mozilla တို့ကိုယ်တိုင် ဖေ့စ်ဘုတ် ကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပေမယ့် ဒါဟာ ယာယီသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် WhatsApp ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Acton က ဖေ့စ်ဘုတ် ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် ဖေ့စ်ဘုတ် ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Instagram ကိုတော့ သူဟာ ခုထိ ဆက်သုံးနေခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက် အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် ကို စွန့်ခွာဖို့ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရော သာမန်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပါ ပြောသလောက်တော့ မလွယ်လှတာမြင်ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် ဟာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် တခြား Social Media တွေထက် ပိုပြည့်စုံတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖန်တီးပေးထားသလို ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက်လည်း လက်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဂယ်လိုဝေးရဲ့ စာထဲမှာတော့ မီဒီယာတွေ၊ အစိုးရတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုယ်တိုင်က ဖေ့စ်ဘုတ် ကို အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်မြှောက်ပင့်ခဲ့ကြသလို အကန့်အသတ်မဲ့ အရင်းအနှီးတွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်ခွင့်တွေလည်း ပေးမိခဲ့တာကြောင့် ဒီအခြေအနေကို ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ခုတော့ သူတို့ကို ဇာတ်ကြိုးသတ်ဖို့ ခက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဂယ်လိုဝေးပြောခဲ့သလိုပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသာမကပဲ လူတွေကိုယ်တိုင်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ် ကို တကယ့်ဘဝရဲ့ တခြားမျက်နှာစာလို အသုံးချနေကြတာကြောင့် စွန့်ခွာဖို့ ခက်နေလိမ့်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ Social Media အခနျးကဏ်ဍ ~ ရွှေးကောက်ပွဲနှင့် Social Media အခန်းကဏ္ဍ
နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျ သမ်မတရှေးကောကျပှဲကငျြးပသညျ။ သမ်မတလောငျးမြားဖွဈကွသညျ့ ဟီလာရီ ကလငျတနျနှငျ့ ဒျေါနယျ ထရမျ့ပျတို့၏ အားပွိုငျမှုမှာ လူမှုကှနျယကျနှငျ့ မီဒီယာမြားတှငျ စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံး ဖွဈနခေဲ့သညျ။
ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျမှုစညျးရုံးမှု ကာလတဈလြှောကျ မိနျ့ခှနျးမြား၊ စကားစဈထိုးပှဲမြားကို ရုပျ၊ သံ မီဒီယာမြားမှသာမက အငျတာနကျဝကျဘျဆိုကျမြား အပါအဝငျ
အမြိုးမြိုးသော မီဒီယာပလကျဖောငျးမြားမှ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ဖျောပွခွငျးဖွငျ့ လူထုကို ဆှဲဆောငျစညျးရုံးမှုမြားကို မွငျတှခေဲ့ရသညျ။ အမရေိကမှ ပွညျသူမြားသာမက နိုငျငံတကာမှ လူအမြားတို့ပငျလြှငျ အဆိုပါ ရှေးကောကျပှဲကို ရငျခုနျစှာဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ရသညျ။ ဤမြှမကသေး။ Twitter၊ Facebook၊ Instagram နှငျ့ တခွားသော လူမှုကှနျယကျဝကျဘျဆိုကျမြားတှငျလညျး ၎င်းငျးတို့ ပွောဆိုဆှေးနှေးခဲ့သညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ထောကျခံမှု၊ ကနျ့ကှကျမှုမြားနှငျ့ သောသောညံခဲ့သညျ။
အမရေိကနျမီဒီယာမြား၏ သတငျးဖျောပွခကျြမြားအရ ၂၀၁၆ ရှေးကောကျပှဲကာလတှငျ အမရေိကနျပွညျသူမြားကိုယျတိုငျ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့သတျဆိုငျသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို လူမှုကှနျယကျမြား အငျတာနကျမြားမှ ရှာဖှမှေုမြား၊ လလေ့ာမှုမြား အဆမတနျပိုမိုမွငျ့မားလာနကွေောငျး ဖျောပွကွသညျ။ နောကျဆုံး ရှေးကောကျပှဲ ၂ ကွိမျဖွဈသညျ့ ၂၀၀၈ နှငျ့ ၂၀၁၂ တို့တှငျ သမ်မတအိုဘားမားတဈယောကျ လူမှုကှနျယကျကမျပိနျးမြားကို ထိထိရောကျရောကျအသုံးခနြိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ လကျရှိ သမ်မတလောငျးလြာ ၂ ယောကျမှာလညျး လူမှုကှနျယကျမှတဆငျ့ ပွညျသူမြားကို ဆှဲဆောငျရနျ အပွငျးအထနျကွိုးစားခဲ့ကွသညျကို မွငျတှခေဲ့ရသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ၅ နှဈခနျ့ကို လှမျးမြှျောကွညျ့လြှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ တိုငျးပွညျတဈခု၏ အနာဂတျကို အဆုံးအဖွတျပေးမညျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျမြားကို ကွီးမားစှာ အကြိုးသကျရောကျစလေောကျသညျ့ အရာမြားတော့ မဟုတျခဲ့ပေ။ သို့သျောလညျး လူမှုကှနျယကျမြား၏ ပေါကျကှဲအားနှငျ့ ထိရောကျမှုနှုနျးထားမှာ ကွောကျခမနျးလိလိ တိုးတကျလာနသေောကွောငျ့ ယနခေ့တျေတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားမြား၏ စညျးရုံးရေး လှုပျရှားမှုမြား၌ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ သိသာထငျရှားသညျ့ အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျနပွေီဖွဈသညျ။
ဥပမာအနဖွေငျ့ ယခုလာမညျ့ ၂၀၁၆ အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကိုယျစားလှယျလောငျးအသီးသီးက မဲဆှယျစညျးရုံးကွရာတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအနဖွေငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားကို အလှနျအကြှံ အားကိုးလှနျးကွသညျဟုပငျ သမားရိုးကမြီဒီယာမြားကဝဖေနျကွသညျ အထိဖွဈခဲ့သညျ။ သူတို့ မညျကဲ့သို့ Campaign မြား လုပျသညျ၊ မညျကဲ့သို့ အသုံးခနြကွေသညျ၊ မညျသညျ့အခကျြအလကျမြားကို လူထုထံခပြွနကွေသညျ ဆိုသညျမြားကို တခုတျတရပွောဆိုဆှေးနှေးနရေသညျအထိပငျ။
မဲဆှယျစညျးရုံးမှု ကာလတဈလြှောကျ Twitter တှငျ ဟီလာရီ၏ ကမျပိနျးကို Follow ထားခဲ့ ၉ သနျးကြျောရှိပွီး Facebook တှငျမူ ၆ သနျးကြျောရှိလသေညျ။ ထရမျ့ပျမှာမူ လူမှုကှနျယကျတှငျ ဟီလာရီကို အပွတျအသတျအသာရခဲ့ပွီး Twitter တှငျ Follower ၁၁ သနျးကြျောနှငျ့ Facebook တှငျလညျး Like ၁၁ သနျးနီးပါးရှိခဲ့သညျ။ ယငျးအတှကျ ၂ ဘကျစလုံးမှ ငှကွေေး ပမာဏ အမွောကျအမြား အကုနျအကခြံ၍ စနဈတကမြဟာဗြူဟာမြားရေးဆှဲ ပွငျဆငျဆောငျရှကျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။
မွနျမာပွညျတှငျးမှာလဲ ယခုဆိုပါက မိုဘိုငျးဆကျသှယျရေးစနဈမြား အထိုကျအလြောကျ ပိုမိုကောငျးမှနျလာသညျ။ အငျတာနကျကိုလညျး ယခငျကထကျ ပိုမိုတှငျကယျြစှာ သုံးစှဲလာကွသညျ့အခြိနျတှငျ Social Media မြား၏ အခနျးကဏ်ဍကလညျး အလိုလိုရှသေို့ တိုးထှကျလာခဲ့သညျ။ သာမနျလူမြားအနဖွေငျ့ မပွောပါနှငျ့။ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ ထိပျတနျး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ လှတျတျောအမတျမြားပငျလြှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားပျေါတှငျ ပြျောမှနေ့ကွေသညျကို မွငျတှနေ့ရေသညျ။
အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျပါက အငျတာနကျသုံးစှဲသူအရအေတှကျ နညျးပါးသေးသော မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြား၏ အခနျးကဏ်ဍသညျ အတနျငယျနညျးပါးသညျဟု ထငျရသျောလညျး လကျရှိလူဦးရေ၏ ထကျဝကျနီးကြျောခနျ့ အငျတာနကျသုံးစှဲလာကွသဖွငျ့ တိုငျးပွညျအနအေထားဖွငျ့ နှိုငျးစာလြှငျမူ နညျးသညျဟု မဆိုသာ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၆ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးတှငျလညျး တရားဝငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးခရီးစဉျမြားအပွငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားမှတဆငျ့ စှဲဆောငျစညျးရုံးမှုမြားကို ထငျရှာစှာ မွငျတှခေဲ့ရပွီး လူထု၏ တကျကွှသော တုနျ့ပွနျမှုကိုလညျး မွငျခဲ့ရသညျ။ ပါတီကွီးမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားတဈခြို့က ကွိုတငျမရညျရှယျထားသျောလညျး မဲဆှယျစညျးရုံးမှုဆနျဆနျလှုပျရှားမှုမြား၊ ဆှဲဆောငျမှုမြားကို လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ထောကျခံသံမြား၊ ကနျ့ကှကျသံမြား၊ အငွငျးအခုံမြားဖွငျ့ စညျစညျကားကားရှိခဲ့လသေညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ မွနျမာ့ ရှေးကောကျပှဲကာလက အခွအေနမြေားအရ မွနျမာပွညျတှငျ နိုငျငံရေးသမားမြားအနဖွေငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာကို အသုံးခြ၍ ဆှဲဆောငျစညျးရုံးမှုမြားမှာ အတနျသငျ့ပငျမြားပွားလာခဲ့သညျ။ NLD ပါတီဆိုလြှငျမူ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဆိုရှယျမီဒီယာနှငျ့ ပွငျပဆကျဆံရေးမြားအတှကျ သီးခွားသငျကွားမှုမြားပငျ ပွုလုပျပေးခဲ့သညျဟုပငျ ကွားမိလသေညျ။
သို့သျောလညျး ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲကာလက ပါတီမြား၏ ဆိုရှယျမီဒီယာလှုပျရှားမှုမြားတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေ စကားစုမြား၊ ခှနျအားဖွညျ့စကားစုမြား၊ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး၏ သတငျးအခကျြအလကျမြား၊ Landscape မြား၊ Info-graphic မြား မတှရှေိ့ရသေးသညျကတော့ အမှနျပငျ။ တနျဖိုးနညျးနညျးဖွငျ့ ထိရောကျမှုရှိသော မဲဆှယျခှငျ့ အခှငျ့အရေးကို လကျလှတျခံခဲ့ကွသညျ။ သို့သျောလညျး လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျမူ လူမှုကှနျယကျကဏ်ဍသညျ ယခုထကျပိုမို ရှရေ့ောကျလာမညျမှာတော့ မွကွေီးလကျခတျမလှဲပငျ။
ယခု အမရေိကနျရှေးကောကျပှဲ၌ ဆိုရှယျမီဒီယာနိုငျငံရေးကို နားလညျသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ရှရေ့ောကျလာကွပွီး သူတို့၏ Campaign မြား အလုပျဖွဈမဖွဈကလညျး သူတို့၏ မဲအရအေတှကျအပျေါ သကျရောကျမှုမြားလာသညျဟု CIO မဂ်ဂဇငျးမှာ အကွီးတနျးစာရေးဆရာမ Lauren Brousell က သုံးသပျခဲ့ဖူးသညျ။
အမှနျတကယျလညျး လကျရှိအခြိနျတှငျ သမ်မတသဈဖွဈလာသညျ့ ဒျေါနယျ ထရမျ့ပျနှငျ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သူ ဟီလာရီကလငျတနျတို့ စတငျယှဉျပွိုငျကွစဉျကတညျးက ဆိုရှယျမီဒီယာမြားတှငျ ရပေနျးအစားဆုံးပုဂ်ဂိုလျမြား ဖွဈခဲ့ကွသောကွောငျ့ Mrs.Brousell ထိုသို့ ပွောသညျကိုလညျး အပွဈတော့မဆိုရာ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှ နောကျဆုံး ရှေးကောကျပှဲ ၃ ခုတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာ ကမျပိနျးကောငျးကောငျး အသုံးပွု၍ စှဲဆောငျခဲ့သူမြားသာ ဆကျတိုကျ အောငျပှဲခံခဲ့လသေညျ။
အခြုပျဆိုရသျော ဆိုရှယျမီဒီယာမြားသညျ တိုငျးပွညျတဈခု၏ အနာဂတျကို အဆုံးအဖွတျပေးမညျ့ အရာမြားဟူ၍ ယတိပွတျ ညှနျးဆိုရနျ ခကျခဲလှသေးသညျ။ သို့သျော တဖွေးဖွေးနှငျ့ ပို၍ပို၍ အရေးပါသော အခွအေနမြေားကိုတော့ ဖနျတီးယူလာနကွေပွီဖွဈသညျ။ တဈခြိနျမဟုတျ တဈခြိနျတှငျတော့ သူတို့သညျပငျ ရှေးကောကျပှဲရလဒျကို အဖွထေုတျသညျ့ မီဒီယာပလကျဖောငျး ဖွဈကောငျးဖွဈလာနိုငျပသေညျ။
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည်။ သမ္မတလောင်းများဖြစ်ကြသည့် ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် ဒေါ်နယ် ထရမ့်ပ်တို့၏ အားပြိုင်မှုမှာ လူမှုကွန်ယက်နှင့် မီဒီယာများတွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှုစည်းရုံးမှု ကာလတစ်လျှောက် မိန့်ခွန်းများ၊ စကားစစ်ထိုးပွဲများကို ရုပ်၊ သံ မီဒီယာများမှသာမက အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ အပါအဝင်
အမျိုးမျိုးသော မီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် လူထုကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အမေရိကမှ ပြည်သူများသာမက နိုင်ငံတကာမှ လူအများတို့ပင်လျှင် အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲကို ရင်ခုန်စွာဖြင့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ရသည်။ ဤမျှမကသေး။ Twitter၊ Facebook၊ Instagram နှင့် တခြားသော လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လည်း ၎င်းတို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ခံမှု၊ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် သောသောညံခဲ့သည်။
အမေရိကန်မီဒီယာများ၏ သတင်းဖော်ပြချက်များအရ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် အမေရိကန်ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သတ်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ယက်များ အင်တာနက်များမှ ရှာဖွေမှုများ၊ လေ့လာမှုများ အဆမတန်ပိုမိုမြင့်မားလာနေကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။ နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်သည့် ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၂ တို့တွင် သမ္မတအိုဘားမားတစ်ယောက် လူမှုကွန်ယက်ကမ်ပိန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိ သမ္မတလောင်းလျာ ၂ ယောက်မှာလည်း လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့် ပြည်သူများကို ဆွဲဆောင်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ခန့်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လျှင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ကြီးမားစွာ အကျိုးသက်ရောက်စေလောက်သည့် အရာများတော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း လူမှုကွန်ယက်များ၏ ပေါက်ကွဲအားနှင့် ထိရောက်မှုနှုန်းထားမှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးတက်လာနေသောကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၏ စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုများ၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် သိသာထင်ရှားသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေဖြင့် ယခုလာမည့် ၂၀၁၆ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသီးသီးက မဲဆွယ်စည်းရုံးကြရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို အလွန်အကျွံ အားကိုးလွန်းကြသည်ဟုပင် သမားရိုးကျမီဒီယာများကဝေဖန်ကြသည် အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ မည်ကဲ့သို့ Campaign များ လုပ်သည်၊ မည်ကဲ့သို့ အသုံးချနေကြသည်၊ မည်သည့်အချက်အလက်များကို လူထုထံချပြနေကြသည် ဆိုသည်များကို တခုတ်တရပြောဆိုဆွေးနွေးနေရသည်အထိပင်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ကာလတစ်လျှောက် Twitter တွင် ဟီလာရီ၏ ကမ်ပိန်းကို Follow ထားခဲ့ ၉ သန်းကျော်ရှိပြီး Facebook တွင်မူ ၆ သန်းကျော်ရှိလေသည်။ ထရမ့်ပ်မှာမူ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဟီလာရီကို အပြတ်အသတ်အသာရခဲ့ပြီး Twitter တွင် Follower ၁၁ သန်းကျော်နှင့် Facebook တွင်လည်း Like ၁၁ သန်းနီးပါးရှိခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် ၂ ဘက်စလုံးမှ ငွေကြေး ပမာဏ အမြောက်အများ အကုန်အကျခံ၍ စနစ်တကျမဟာဗျူဟာများရေးဆွဲ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရေစီးတစ်ခုဖြစ်လာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသည်လည်း အဆိုပါရေစီးထဲတွင် မျောပါခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြည့်လျှင် သိသာနိုင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ထက် နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် နိုင်ငံများတွင် တခုတ်တရကို အရေးစိုက်ကြိုးပမ်းနေကြသည်မှာ မဆန်းလှပေ။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာလဲ ယခုဆိုပါက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ အထိုက်အလျောက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အင်တာနက်ကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလာကြသည့်အချိန်တွင် Social Media များ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အလိုလိုရှေ့သို့ တိုးထွက်လာခဲ့သည်။ သာမန်လူများအနေဖြင့် မပြောပါနှင့်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များပင်လျှင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင် ပျော်မွေ့နေကြသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အင်တာနက်သုံးစွဲသူအရေအတွက် နည်းပါးသေးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အတန်ငယ်နည်းပါးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း လက်ရှိလူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးကျော်ခန့် အင်တာနက်သုံးစွဲလာကြသဖြင့် တိုင်းပြည်အနေအထားဖြင့် နှိုင်းစာလျှင်မူ နည်းသည်ဟု မဆိုသာ။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၆ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်လည်း တရားဝင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များအပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှတဆင့် စွဲဆောင်စည်းရုံးမှုများကို ထင်ရှာစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး လူထု၏ တက်ကြွသော တုန့်ပြန်မှုကိုလည်း မြင်ခဲ့ရသည်။ ပါတီကြီးများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ချို့က ကြိုတင်မရည်ရွယ်ထားသော်လည်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆန်ဆန်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ထောက်ခံသံများ၊ ကန့်ကွက်သံများ၊ အငြင်းအခုံများဖြင့် စည်စည်ကားကားရှိခဲ့လေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ မြန်မာ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလက အခြေအနေများအရ မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးချ၍ ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုများမှာ အတန်သင့်ပင်များပြားလာခဲ့သည်။ NLD ပါတီဆိုလျှင်မူ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပြင်ပဆက်ဆံရေးများအတွက် သီးခြားသင်ကြားမှုများပင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဟုပင် ကြားမိလေသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလက ပါတီများ၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေ စကားစုများ၊ ခွန်အားဖြည့်စကားစုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ Landscape များ၊ Info-graphic များ မတွေ့ရှိရသေးသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ တန်ဖိုးနည်းနည်းဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသော မဲဆွယ်ခွင့် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ လူမှုကွန်ယက်ကဏ္ဍသည် ယခုထက်ပိုမို ရှေ့ရောက်လာမည်မှာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။
ယခု အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာနိုင်ငံရေးကို နားလည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရှေ့ရောက်လာကြပြီး သူတို့၏ Campaign များ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကလည်း သူတို့၏ မဲအရေအတွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုများလာသည်ဟု CIO မဂ္ဂဇင်းမှာ အကြီးတန်းစာရေးဆရာမ Lauren Brousell က သုံးသပ်ခဲ့ဖူးသည်။
အမှန်တကယ်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် သမ္မတသစ်ဖြစ်လာသည့် ဒေါ်နယ် ထရမ့်ပ်နှင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သူ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကြစဉ်ကတည်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ရေပန်းအစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့် Mrs.Brousell ထိုသို့ ပြောသည်ကိုလည်း အပြစ်တော့မဆိုရာ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ ၃ ခုတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကမ်ပိန်းကောင်းကောင်း အသုံးပြု၍ စွဲဆောင်ခဲ့သူများသာ ဆက်တိုက် အောင်ပွဲခံခဲ့လေသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် အရာများဟူ၍ ယတိပြတ် ညွှန်းဆိုရန် ခက်ခဲလှသေးသည်။ သို့သော် တဖြေးဖြေးနှင့် ပို၍ပို၍ အရေးပါသော အခြေအနေများကိုတော့ ဖန်တီးယူလာနေကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တွင်တော့ သူတို့သည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အဖြေထုတ်သည့် မီဒီယာပလက်ဖောင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။
The Voice Daily (14-Nov)
Facebook မှာ ပိုမိုထိရောကျအောငျ ဘယျလိုကွျောငွာရမလဲ ~ Facebook မှာ ပိုမိုထိရောက်အောင် ဘယ်လိုကြော်ငြာရမလဲ
မွနျမာနိုငျငံမှာ မိုဘိုငျးဖုနျးတှေ ပေါမြားလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပွညျတှငျးလူမူကှနျယကျ (Social Media) အသုံးပွုမှုနှုနျးက အံ့ဘနနျး မွငျ့တကျလာနပေါတယျ။ အနောကျကမ်ဘာမှာ လူမှုကှနျယကျအသုံးပွုမှု အတနျငယျ ကဆြငျးနပေမေယျ့ မွနျမာပွညျတှငျးမှာကတော့ အရှိနျအဟုနျနဲ့ကို တိုးတကျနတောပါ။
ဒီလိုအသုံးပွုမှုမွငျ့တကျလာတဲ့အခါ ကြှဲကူးရပေါ ဒဈဂဈြတယျကွျောငွာလုပျငနျးတှလေညျး လိုကျပါဖှံ့ဖွိုးလာပါတယျ။ Facebook မှာ မမွငျခငျြမှ အဆုံးမွငျနရေတာက Sponsored လို့ ဖျောပွထားတဲ့ Postတှေ တှဖွေဈလာပါတယျ။ ဒီပို့ဈတှဟော Facebook ကို အခကွေးငှပေေးပွီး Boost လုပျထားတဲ့ Post တှပေါ။ ယဘြေုယအြားဖွငျ့ ဒီ Post တှအေတှကျ ပေးခတြေဲ့ အခကွေးငှတှေကေနတေဆငျ့ Facebook က ဝငျငှေ အကြိုးအမွတျအမြားအပွားရပါတယျ။
Facebook က အခမဲ့ ဝနျဆောငျမှုဖွဈပမေယျ့ ဒီလိုကွျောငွာလုပျငနျးတှကေနတေဆငျ့ ပွနျလညျအကြိုးအမွတျရှာဖှတောဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံ အသုံးပွုနကွေတဲ့ ဒဈဂဈြတယျပလကျဖောငျးဖွဈတာကွောငျ့ ပွနျလညျရရှိတဲ့ အကြိုးအမွတျက သေးသေးကှေးကှေးတော့ မဟုတျလှပါဘူး။ ၂ဝ၁၇ ဒုတိယလေးလပတျတဈခုတညျးမှာတငျ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလြံကြျောပါတယျ။ အဲဒီပမာဏထဲမှာ မွနျမာပွညျက စီးဝငျသှားတဲ့ ငှတှေလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
တဈဖကျမှာ Facebook က ဝငျငှလေမျးဖြောငျ့နသေလို ပွညျတှငျးစီးပှားရေးလုပျငနျးတှအေတှကျလညျး Facebook ကနေ မိမိတို့လုပျငနျးတှကေို လူသိမြားအောငျ ကွိုးပမျးတာဟာ ထိရောကျမှုရှိတဲ့ ကွျောငွာ ပလကျဖောငျး တဈခုဖွဈလာနပေါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရလညျး ပွညျတှငျးမှာသာမက ပွညျပမှာပါ လူမှုကှနျယကျ ပလကျဖောငျးပျေါကနေ ကွျောငွာတာဟာ သတငျးနဲ့ ပုံနှိပျမီဒီယာတှအေပျေါကနေ ကွျောငွာတာထကျကို ပိုပွီးထိရောကျမှုရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီလို အသုံးဝငျလှတဲ့ Facebook ကို အသုံးခပြွီး မိမိတို့ရဲ့ အမှတျတံဆိပျတှကေို လူသိမြားအောငျ ဘယျလိုကွျောငွာကွမလဲ။ လူတိုငျးက ကွျောငွာအဂေငျြစီတှအေသုံးပွုခငျြမှ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ ဥပမာ အှနျလိုငျးရှော့ပငျလေးတှေ တနိုငျတပိုငျ SME’s လေးတှအေနနေဲ့ အဂေငျြစီငှားရမျးပွီး ကွျောငွာဖို့ ခကျခဲမှာအမှနျပါပဲ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ မိမိကိုယျတိုငျ မိမိတို့ရဲ့ အမှတျတံဆိပျတှကေို လူသိမြားအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုလုပျဆောငျရာမှာ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြတဈခြို့ကို ဖျောပွပေးရမယျဆိုရငျ။
၁။ Hashtag နဲ့ တငျတဲ့ post တှဟော Facebook ပျေါမှာ engagement နညျးစပေါတယျ။ ဒါဟာအတျောမြားမြား အထငျလှဲမှားနတေဲ့အခကျြတဈခကျြဖွဈပါတယျ။ # နဲ့ တငျရငျ လူသိပိုမြားမယျလို့ လူအတျောမြားမြားက ယူဆကွပါတယျ။ အဲအခကျြကို သတိထားသငျ့ပါတယျ။
၂။ ညမိုးခြုပျခြိနျမှာ တငျတဲ့ post တှဟော ပိုအောငျမွငျနိုငျပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အဲဒီအခြိနျအတှငျးမှာ post တငျတဲ့သူနညျးပွီး Facebook သုံးတဲ့သူ အရအေတှကျက မြားလို့ဖွဈပါတယျ။
၃။ ကိုယျ့ရဲ့ Page မှာ Pages to watch ကိုယျနဲ့ အလားတူ Page တှရေဲ့ engagement တှေ activities တှကေို စောငျ့ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒါဟာပွိုငျဘကျတှကေို ယှဉျပွိုငျဖို့နဲ့ marketing strategies အတှကျ အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။
၄။ Audience Insight ကိုသုံးပါ။ အဲ့ကနတေဆငျ့ ကိုယျရဲ့ Budget ၊ ROI ၊ Interest နဲ့ Target segment ရှိမယျ့ Demographic ကို တိတိကကြသြိနိုငျပါတယျ။
၅။ Youtube Video Link တှေ မတငျပါနဲ့။ Youtube က Video link ကို Facebook မှာ ထညျ့ခွငျးဟာ အမှားကွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဖွဈနိုငျရငျ Post တှမှော Original Photo/video ကို သုံးပါ။ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ရိုကျထားတဲ့ ပုံနဲ့ သူမြားဆီကယူ သုံးတဲ့ပုံတှရေဲ့ Reach တှေ၊ Engagement တှေ ကှာပါတယျ။ Digital Platform တှေ ရဲ့ AI နညျးပညာကို လြော့မတှကျပါနဲ့။ ကိုယျ ဖနျတီးထားတဲ့ ပုံလား? သူမြားဆီက ယူသုံးသလား? ဆိုတာကို သိရှိကွတာမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျဖနျတီးပွီးတငျပါ။
၆။ Content အရှညျကွီးမဟုတျပဲ သာမနျ Post တငျမယျဆိုရငျ စာလုံးအရအေတှကျ ၁၅၀ ဝနျးကငျြပဲရှိတဲ့ Post တှဟော ရှညျရှညျဝေးဝေးရေးထားတဲ့ Post တှထေကျ engagement ပိုကောငျးပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ တိုတိုရှငျးရှငျး ထိထိမိမိသာရေးပါ။
၇။ ပုံမှနျ Facebook ကွျောငွာတဈခုရဲ့ Click-through rate (CTA) ဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဝ.၉% သာရှိတယျလို့ လလေ့ာခကျြတှကေ ဆိုပါတယျ။ CTA button ထညျ့လိုကျမယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီပမာဏထကျ သုံးဆကြျောတကျလာပါတယျ။
၈။ A/B Testing လုပျပါ။ မတူညီတဲ့ ads တှကေ မတူညီတဲ့ response တှရေပါတယျ။ ငှအေမြားကွီးသုံးပွီ မကွျောငွာခငျ၊ ဘယျကွျောငွာပိုထိရောကျလညျးဆိုတာ AB Tasty တို့ Apptimize တို့လို A/B Testing Tool တှကေို သုံးပွီး A/B Test အရငျ လုပျသငျ့ပါတယျ။
၉။ Facebook မှာ ဖှဲ့ဖှဲ့နှဲ့နှဲ့နဲ့ ကွျောငွာ Content ဖနျတီးမယျဆိုရငျတော့ စာလုံးရေ ၁၀၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ အကွားဟာ အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဖနျတီး မယျ့ Content တှေ မှာ Search Engine Optimization (SEO) ဖွဈဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ SEO ဆိုတာ ကိုယျရဲ့ Content ဟာ Google ၊ Facebook ၊ Youtube နဲ့ Amazon အပွငျ အခွား Platform ပျေါထိ သကျရောကျမှု ရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ Content ဟာ Facebook ပျေါမှာပဲ ဆိုရငျတောငျ SEO ကောငျးဖို့ လိုတာပါ။
၁၀။ စာလုံးပေါငျး သတျပုံ ဂရုစိုကျပါ။ အထူးသဖွငျ့ လူသိမြားတဲ့ ကုနျအမှတျတံဆိပျ Brand တှေ ပေါကျပွီးသား စကားလုံးတှကေို မှနျကနျစှာ ရေးသားပါ။ ဥပမာ Facebook ကို အင်ျဂလိပျလို ရေးထားတဲ့ post မှာ “F” ကို အသေးနဲ့ ရေးပွီး Boost ကွညျ့ပါ။ မပွငျ မခငျြး boost လုပျခှငျ့ မပေးသလို မ Boost ပွနျရငျလညျး (organic) ranking score ကို ထိခိုကျတာမို့ ဖနျးတီးထားတဲ့ content တဈခုလုံးကိုဖွဈစေ၊ Page/Website တဈခုလုံးကိုဖွဈစေ နဈနာစမှောဖွဈပါတယျ။
၁၁။ အငျတာနကျနဲ့ လူမှုကှနျယကျတှမှော လူတှရေဲ့ ရှာဖှမှေု အကွိမျအရအေတှကျ ဟာ အရမျးတိုးတကျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျရေးမယျ့ content တှေ မှာ အမြားစုရှာဖှနေတေဲ့ အင်ျဂလိပျလို Keywords/Phrase တှေ ပါရငျ ကိုယျ့ Content ဟာ ပိုပေါကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မရေးခငျက ကိုယျရေးမယျ့ Content ဟာ ဘယျလို Keyword တှေ နဲ့ ဆကျစပျသလဲ ဆိုတာ စဉျးစားပွီးမှ ရေးပါ။ မွနျမာလိုရေးတဲ့ Content မှာတောငျ ကိုယျ့စာနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ အင်ျဂလိပျ Keyword လေးငါး လုံး ညှပျထညျ့ ပေးသငျ့ပါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေို ဂရုစိုကျပွီး Content တှဖေနျတီး Post တှေ တငျပွီး မိမိရဲ့ လုပျငနျးတှကေို လူသိပိုမြားလာအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။ ဒဈဂဈြတယျအဂေငျြစီတှေ မငှားနိုငျရငျတောငျမှ ဒီအခကျြတှကေို လိုကျနာရုံနဲ့ ပိုကောငျးမှနျတဲ့ ကွျောငွာနညျးလမျးတှဖွေဈလာမှာပါ။
တကယျတမျး ကိုယျ့အမှတျတံဆိပျလူသိမြားဖို့ဆိုရငျ မိမိ Page က Content တှကေို Click မြားအောငျ၊ Engagement မြားအောငျ၊ Organic reach မြားအောငျ လုပျဖို့ “အစဉျတစိုကျ” ကွိုးစားနဖေို့က အဓိကဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြကို အလေးထားနိုငျနသေရှေ့ မိမိလုပျငနျးအတှကျ အကောငျးဆုံး ရလဒျတှကေို ဖနျတီးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ပေါများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းလူမူကွန်ယက် (Social Media) အသုံးပြုမှုနှုန်းက အံ့ဘနန်း မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ အနောက်ကမ္ဘာမှာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုမှု အတန်ငယ် ကျဆင်းနေပေမယ့် မြန်မာပြည်တွင်းမှာကတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ကို တိုးတက်နေတာပါ။
ဒီလိုအသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာတဲ့အခါ ကျွဲကူးရေပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေလည်း လိုက်ပါဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ Facebook မှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံးမြင်နေရတာက Sponsored လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ Postတွေ တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီပို့စ်တွေဟာ Facebook ကို အခကြေးငွေပေးပြီး Boost လုပ်ထားတဲ့ Post တွေပါ။ ယျေဘုယျအားဖြင့် ဒီ Post တွေအတွက် ပေးချေတဲ့ အခကြေးငွေတွေကနေတဆင့် Facebook က ဝင်ငွေ အကျိုးအမြတ်အများအပြားရပါတယ်။
Facebook က အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပေမယ့် ဒီလိုကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေကနေတဆင့် ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်က သေးသေးကွေးကွေးတော့ မဟုတ်လှပါဘူး။ ၂ဝ၁၇ ဒုတိယလေးလပတ်တစ်ခုတည်းမှာတင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလျံကျော်ပါတယ်။ အဲဒီပမာဏထဲမှာ မြန်မာပြည်က စီးဝင်သွားတဲ့ ငွေတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ Facebook က ဝင်ငွေလမ်းဖျောင့်နေသလို ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း Facebook ကနေ မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေကို လူသိများအောင် ကြိုးပမ်းတာဟာ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ကြော်ငြာ ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရလည်း ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပမှာပါ လူမှုကွန်ယက် ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ ကြော်ငြာတာဟာ သတင်းနဲ့ ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေအပေါ်ကနေ ကြော်ငြာတာထက်က်ို ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလို အသုံးဝင်လှတဲ့ Facebook ကို အသုံးချပြီး မိမိတို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို လူသိများအောင် ဘယ်လိုကြော်ငြာကြမလဲ။ လူတိုင်းက ကြော်ငြာအေဂျင်စီတွေအသုံးပြုချင်မှ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ အွန်လိုင်းရှော့ပင်လေးတွေ တနိုင်တပိုင် SME’s လေးတွေအနေနဲ့ အေဂျင်စီငှားရမ်းပြီး ကြော်ငြာဖို့ ခက်ခဲမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိတို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို လူသိများအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့အချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်။
၁။ Hashtag နဲ့ တင်တဲ့ post တွေဟာ Facebook ပေါ်မှာ engagement နည်းစေပါတယ်။ ဒါဟာအတော်များများ အထင်လွဲမှားနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ # နဲ့ တင်ရင် လူသိပိုများမယ်လို့ လူအတော်များများက ယူဆကြပါတယ်။ အဲအချက်ကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
၂။ ညမိုးချုပ်ချိန်မှာ တင်တဲ့ post တွေဟာ ပိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ post တင်တဲ့သူနည်းပြီး Facebook သုံးတဲ့သူ အရေအတွက်က များလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ Page မှာ Pages to watch ကိုယ်နဲ့ အလားတူ Page တွေရဲ့ engagement တွေ activities တွေကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပြိုင်ဘက်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့နဲ့ marketing strategies အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
၄။ Audience Insight ကိုသုံးပါ။ အဲ့ကနေတဆင့် ကိုယ်ရဲ့ Budget ၊ ROI ၊ Interest နဲ့ Target segment ရှိမယ့် Demographic ကို တိတိကျကျသိနိုင်ပါတယ်။
၅။ Youtube Video Link တွေ မတင်ပါနဲ့။ Youtube က Video link ကို Facebook မှာ ထည့်ခြင်းဟာ အမှားကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြစ်နိုင်ရင် Post တွေမှာ Original Photo/video ကို သုံးပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံနဲ့ သူများဆီကယူ သုံးတဲ့ပုံတွေရဲ့ Reach တွေ၊ Engagement တွေ ကွာပါတယ်။ Digital Platform တွေ ရဲ့ AI နည်းပညာကို လျော့မတွက်ပါနဲ့။ ကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံလား? သူများဆီက ယူသုံးသလား? ဆိုတာကို သိရှိကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတင်ပါ။
၆။ Content အရှည်ကြီးမဟုတ်ပဲ သာမန် Post တင်မယ်ဆိုရင် စာလုံးအရေအတွက် ၁၅၀ ဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့ Post တွေဟာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရေးထားတဲ့ Post တွေထက် engagement ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်နုိုင်ရင် တိုတိုရှင်းရှင်း ထိထိမိမိသာရေးပါ။
၇။ ပုံမှန် Facebook ကြော်ငြာတစ်ခုရဲ့ Click-through rate (CTA) ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ၀.၉% သာရှိတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုပါတယ်။ CTA button ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီပမာဏထက် သုံးဆကျော်တက်လာပါတယ်။
၈။ A/B Testing လုပ်ပါ။ မတူညီတဲ့ ads တွေက မတူညီတဲ့ response တွေရပါတယ်။ ငွေအများကြီးသုံးပြီ မကြော်ငြာခင်၊ ဘယ်ကြော်ငြာပိုထိရောက်လည်းဆိုတာ AB Tasty တို့ Apptimize တို့လို A/B Testing Tool တွေကို သုံးပြီး A/B Test အရင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
၉။ Facebook မှာ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့နဲ့ ကြော်ငြာ Content ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ စာလုံးရေ ၁၀၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ အကြားဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖန်တီး မယ့် Content တွေ မှာ Search Engine Optimization (SEO) ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ SEO ဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ Content ဟာ Google ၊ Facebook ၊ Youtube နဲ့ Amazon အပြင် အခြား Platform ပေါ်ထိ သက်ရောက်မှု ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် Content ဟာ Facebook ပေါ်မှာပဲ ဆိုရင်တောင် SEO ကောင်းဖို့ လိုတာပါ။
၁၀။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ ဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် လူသိများတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Brand တွေ ပေါက်ပြီးသား စကားလုံးတွေကို မှန်ကန်စွာ ရေးသားပါ။ ဥပမာ Facebook ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ post မှာ “F” ကို အသေးနဲ့ ရေးပြီး Boost ကြည့်ပါ။ မပြင် မချင်း boost လုပ်ခွင့် မပေးသလို မ Boost ပြန်ရင်လည်း (organic) ranking score ကို ထိခိုက်တာမို့ ဖန်းတီးထားတဲ့ content တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ Page/Website တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ နစ်နာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ လူတွေရဲ့ ရှာဖွေမှု အကြိမ်အရေအတွက် ဟာ အရမ်းတိုးတက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးမယ့် content တွေ မှာ အများစုရှာဖွေနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို Keywords/Phrase တွေ ပါရင် ကိုယ့် Content ဟာ ပိုပေါက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရေးခင်က ကိုယ်ရေးမယ့် Content ဟာ ဘယ်လို Keyword တွေ နဲ့ ဆက်စပ်သလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးမှ ရေးပါ။ မြန်မာလိုရေးတဲ့ Content မှာတောင် ကိုယ့်စာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် Keyword လေးငါး လုံး ညှပ်ထည့် ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး Content တွေဖန်တီး Post တွေ တင်ပြီး မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လူသိပိုများလာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီတွေ မငှားနိုင်ရင်တောင်မှ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာရုံနဲ့ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ကြော်ငြာနည်းလမ်းတွေဖြစ်လာမှာပါ။
တကယ်တမ်း ကိုယ့်အမှတ်တံဆိပ်လူသိများဖို့ဆိုရင် မိမိ Page က Content တွေကို Click များအောင်၊ Engagement များအောင်၊ Organic reach များအောင် လုပ်ဖို့ “အစဉ်တစိုက်” ကြိုးစားနေဖို့က အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အလေးထားနိုင်နေသရွေ့ မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလလုံခွုံရေးကောငျစီရဲ့ မွနျမာနိုငျငံခရီးစဉျက ဘာသငျခနျးစာတှေ ရလိုကျသလဲ ~ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်က ဘာသင်ခန်းစာတွေ ရလိုက်သလဲ
Posted by Admin in နိုင်ငံရေး
UNSC ၏ ၂ ရကျတာခရီးစဉျ
ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနနှေ့ငျ့ မလေ ၁ ရကျနတေို့တှငျ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေး ကောငျစီမှ ကိုယျစားလှယျ ၄၀ ကြျော မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျခဲ့ကွသညျ။ အဆိုပါ ခရီးစဉျကို Peru သံအမတျကွီး Gustavo Adolfo Meza Cuadra Velasqez မှ ဦးဆောငျခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးကောငျစီ၏ အမွဲတမျးအဖှဲ့ဝငျ ၅ နိုငျငံနှငျ့ အလှညျ့ကအြဖှဲ့ဝငျ ၁၀ နိုငျငံတို့မှ သံအမတျမြားလိုကျပါခဲ့ကွသညျ။ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ဧပွီ ၃၀ ရကျ နတှေ့ငျနပွေညျတျောသို့ရောကျရှိခဲ့ကွပွီး နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တို့ အပွငျ နပွေညျတျောရှိ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးအခြို့နှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ကွသညျ။ ညပိုငျးတှငျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးအခြို့နှငျ့ အလုပျသဘော ညစာစားသုံးခဲ့ကွသညျ။ မလေ ၁ ရကျ နတှေ့ငျ မောငျတော ဒသေမြားသို့ သှားရောကျခဲ့ပွီး စဈတှမွေို့တှငျ အရပျဘကျအဖှဲ့ အစညျးအခြို့နှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ကွသညျ။ ထို့နောကျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျကာ ပွနျလညျ ထှကျခှာသှားခဲ့ကွသညျ။ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့မူ အခြိနျမရဟု အကွောငျးပွကာ တှဆေုံ့သှားခဲ့ခွငျးမရှိပေ။
ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီဆိုသညျမှာ အမွဲတမျးအဖှဲ့ဝငျ ၅ နိုငျငံ၊ အလှညျ့ကြ အဖှဲ့ ဝငျ ၁၀ နိုငျငံ စုစုပေါငျး ၁၅ နိုငျငံတို့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသော အဖှဲ့တဈခုဖွဈသညျ။ အမေ ရိကနျ၊ ဗွိတိနျ၊ ပွငျသဈ၊ ရုရှားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့မှ အမွဲတမျးအဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ ရရှိပွီး အခွားကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျ ၁၉၃ နိုငျငံတို့မှ ၁၀ နိုငျငံစီ အလှညျ့ကြ ပါဝငျခှငျ့ရ သညျ။ လကျရှိ အလှညျ့ကအြဖှဲ့ဝငျ ၁၀ နိုငျငံတို့မှာ ဘိုလဈဗီးယား၊ အိုငျဗရီကို့ဈ၊ အီကှေ တိုရီရယျဂီနီ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ကာဇကျစတနျ၊ ကူဝိတျ၊ နယျသာလနျ၊ ပီရူး၊ ပိုလနျနှငျ့ ဆှီဒငျနိုငျငံတို့ဖွဈကွသညျ။ ဆုံးဖွတျခကျြခခြိနျတှငျ အမွဲတမျးအဖှဲ့ဝငျ ၅ နိုငျငံမှ ဗီတို အာဏာဖွငျ့ ပယျခခြှငျ့ရှိပွီး တဈနိုငျငံက ပယျခခြဲ့လြှငျပငျ အဖှဲ့ဝငျ ၁၄ နိုငျငံ သဘောတူ သညျ့တိုငျအောငျ သဲထဲရသှေနျဖွဈစသေညျ့ မူဝါဒကိုကငျြ့သုံးထားသညျ။
လုံခွုံရေးကောငျစီကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျမလာခငျ ဘင်ျဂလား ဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ဦးစှာသှားရောကျခဲ့ကွသညျ။ ဧပွီလ ၂၈ ရကျနတှေ့ငျ Cox’s Bazar မွို့ သို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး ဧပွီလ ၂၉ ရကျနတှေ့ငျ Kutupalong ဒုက်ခသညျစခနျးနှငျ့ တနျဘရူး နယျစပျအနီးရှိ နှဈနိုငျငံနယျနိမိတျမဉျြးတှငျ ယာယီနထေိုငျလကျြရှိသူမြားထံသို့ သှား ရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ကွသညျ။ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဝနျကွီးခြုပျ Sheikh Hasina နှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး မွနျမာ နိုငျငံထဲက ထှကျခှာလာပွီး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံထဲမှာ နထေိုငျသူ သိနျးနဲ့ခြီတဲ့ ရိုဟငျဂြာ မှတျစလငျတှကေို နရေပျပွနျချေါရေး မွနျမာကို ဖိအားပေးရနျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဝနျကွီးခြုပျမှ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ သံတမနျမြား ကို တောငျးဆိုခဲ့သညျ။
ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံသို့မထှကျခှာမီ ဒါကာမွို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျတှငျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတဈခု ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ဘင်ျဂါလီဒုက်ခသညျမြား၏ ငိုကွှေးပွမှု၊ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ အပွဈပုံခြ ပွောဆိုမှုတို့ကို တဈဖကျသတျနားထောငျပွီးနောကျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲဖွဈခွငျးကွောငျ့ ကိုယျစားလှယျမြားထံမှ မီဒီယာသို့ ပွောဆိုမှုမြားကလညျး တဈဖကျသတျမြားသာ ဖွဈခဲ့သညျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိလာရငျတော့ မွနျမာဘကျက တာဝနျရှိသူမြားအသံ၊ ဒသေခံရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြားအသံ၊ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျမြားအသံ နှငျ့ နယျခံမကျြမွငျမြား၏ အသံကိုနားထောငျပွီးပါက ကုလသမဂ်ဂ ကိုယျစားလှယျတို့ အနဖွေငျ့ နှဈဘကျမြှမြှတတ ပွနျလညျစဉျးစား သုံးသပျလာလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့ခဲ့ မိသညျ။
UNSC ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိလာသညျ့နတှေ့ငျပငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျမှ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနတှငျ လကျခံတှဆေုံ့ကာ ပွောဆိုရှငျးလငျးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပျေါတိုးတကျမှုမြား၊ ကိုဖီအာနနျ၏အကွံပွု ခကျြမြား အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျနမှေုမြားကို ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့သညျ့ အပွငျ ကုလသမဂ်ဂနှငျ့မိတျဖကျအဖွဈ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျ့အကွောငျး၊ ကုလ သမဂ်ဂ လကျအောကျခံ အဂေငျြစီမြားနှငျ့ ထိတှဆေ့ောငျရှကျသှားမညျ့အကွောငျး၊ ကုလ သမဂ်ဂဖှံ့ဖွိုးမှုအစီအစဉျ (UNDP) နှငျ့ကုလသမဂ်ဂဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ မဟာမငျးကွီး ရုံး(UNHCR)တို့နှငျ့ နားလညျမှုစာခြှနျလှာတဈရပျ လကျမှတျရေးထိုးသှားမညျ့ အကွောငျးမြားကိုပါ ပွောဆိုခဲ့သညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့တာဝနျရှိသူမြားမှလညျး UNSC ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့ကို ဧပွီလ ၃၀ ရကျနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျ မြား၊ ဘင်ျဂါလီမြားအား ပွနျလညျလကျခံနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့ အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား အပါအဝငျ အခွားကိစ်စ အမြားအပွားကို ပွောဆိုဆှေးနှေးနိုငျခဲ့သညျ့အပွငျ ရခိုငျပွညျနယျအရေး နှငျ့ပတျသကျသော စာရှကျစာတမျးမြားနှငျ့ ဓာတျပုံမှတျတမျးစာအုပျမြားကိုပါ ပေးအပျ ခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှမှေလညျး လုံခွုံရေးကောငျစီ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို ညစာစားပှဲဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံခဲ့ကာ ဦးကြျောတငျ့ဆှေ၊ UEHRD အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ ဝငျးမွတျအေးတို့မှ ရှငျးလငျး ပွောကွားမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပါသေးသညျ။
ပွငျပ ပကတိအရှိတရားမှနျကို လကျတှပွေ့သ
မလေ ၁ ရကျနတှေ့ငျ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီအဖှဲ့ဝငျမြားကို ရခိုငျပွညျနယျ မောငျတော၊ တောငျပွိုလကျဝဲ ပွနျလညျလကျခံရေးစခနျး၊ လှဖိုးခေါငျ ကွားစခနျးတို့ရှိ ပွနျလညျလကျခံနရောခထြားရေး ဆောငျရှကျထားမှုမြားနှငျ့ ရှစေား၊ သဈဆုံးနားခှဆုံ၊ အိုးထိနျး၊ တောငျပွိုလကျဝဲ၊ ငခူရ၊ လှဖိုးခေါငျ၊ ရှဇေား၊ ပနျးတောပွငျ စသညျ့ ကြေးရှာမြားကို ပွသပေးခဲ့သညျ။ ပနျးတောပွငျရှာရှိ ဘင်ျဂါလီမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ရာတှငျ ဘင်ျဂါလီမြားမှ ၎င်းငျးတို့၏ကြေးရှာမြားကို မီးရှို့သူမြားသညျ တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျလူမြိုး မြားဖွဈသညျဟု ကွိုတငျဇာတျတိုကျထားသညျ့အတိုငျး "Military Military" ဆိုသောစကားကိုသာ ပွောဆိုခဲ့သညျဟု ကွားသိရသညျ။ ထို့အပွငျ UNSC အဖှဲ့မြား အပွနျတှငျ ပနျးတောပွငျရှာသားတဈဦးမှ စာတဈစောငျပေးခဲ့သညျဟုသိရပွီး ယငျး စာထဲတှငျပါဝငျသညျ့ အကွောငျးအရာမြားမှာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးမှ ပေးလိုကျ သညျ့ စာပါအကွောငျးအရာမြားနှငျ့ အတူတူဖွဈသညျဟုလညျး ကွားသိရပါသညျ။ ထို့နောကျ UNSC သံတမနျအဖှဲ့ဝငျမြားသညျ မောငျတောထှအေုပျရုံးတှငျ ဟိန်ဒူ မိသားစု ဝငျမြားနှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး၊ ပနျးတောပွငျ မှတျစလငျကြေးရှာမြားသို့ သှားရောကျ လလေ့ာခွငျးမြားပွုလုပျခဲ့သညျ့ပွငျ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့အပါအဝငျ ရခိုငျပွညျနယျ မှ လူမှုအဖှဲ့အစညျးအခြို့နှငျ့ စဈတှေ မွို့တှငျ တှဆေုံ့ခဲ့ကွပါသညျ။
UNSC ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မလေ ၁ ရကျနေ့ မွနျမာနိုငျငံမှ မပွနျခငျ နပွေညျ တျောအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျတှငျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျခဲ့ပွီး ယငျးသတငျး စာရှငျးလငျးပှဲမှ ပွောဆိုခကျြမြားသညျ ယခငျအတိုငျး ပွောငျးလဲမှုမရှိခဲ့ပေ။ ၎င်းငျးတို့ အဖှဲ့အနဖွေငျ့ မွနျမာဘကျက ဆှေးနှေးခဲ့မှုမြားကို လုံးဝထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျး မရှိဘဲ မူလအတိုငျးသာ ပွောဆိုအပွဈတငျ တိုကျတှနျးသှားသညျကို တှရေ့သညျ။ အထူး သဖွငျ့ ဗွိတိနျနိုငျငံမှ ကိုယျစားလှယျဖွဈသူ Karen Pierce သညျ ပွဿနာဖွရှေငျး ရေးထကျ အရေးယူရေးကိုသာ ဦးစား ပေးနခွေငျးအား စိတျပကျြဖှယျတှခေဲ့ရသညျ။
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံး၏ ထုတျပွနျခကျြနှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး တို့၏ သတငျးဖျောပွခကျြမြားအရ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ ပွောဆိုဆှေးနှေးခဲ့မှုမြားသညျ လှနျစှာ ပွညျ့စုံမြှတပွီး ဆငျခွငျသုံးသပျရမညျ့ အထောကျအကူမြားဟု ဆိုနိုငျသညျ။ အလားတူ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြား၊ ဒသေခံ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ ဒသေခံ ပွညျသူမြား၏ ပွောဆိုမှုမြားကလညျး လကျခံစဉျးစားရမညျ့ အခကျြမြားသာဖွဈပေ သညျ။ သို့သျော UNSC ကိုယျစားလှယျမြားက နှဈဘကျညီညှတျမြှတစှာ နားထောငျ စဉျးစားခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ တဈဖကျသတျ စကားမြားကိုသာ နားထောငျကာ တဈဖကျသတျ လှဲမှားစှာ ယုံကွညျ လကျခံထား ကွသညျကို တှရေ့သညျ။
လုံခွုံရေးကောငျစီကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံမှ တာဝနျရှိသူ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးမြားမှ ရှငျးပွနခြေိနျတှငျ ပွဿနာကို စိတျရှညျလကျရှညျ အာရုံစိုကျနားထောငျ ရမညျ့အစား မထီမဲ့မွငျအပွုအမူမြားပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဦးကြျော တငျ့ဆှနေဲ့ UEHRD အဖှဲ့ဝငျမြားပွောပွီးနောကျ ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး ပွောဆို ခြိနျတှငျ မကျတပျရပျကာ ထပွနျမညျ့ပုံစံ ပွောဆိုခဲ့သညျ။ နားမထောငျခငျြသညျ့ပုံစံ၊ မလိုအပျသညျ့ပုံစံမြိုးပွသခဲ့ကွသညျ။ ကုလသမဂ်ဂသံတမနျဟူသညျမှာ သံအမတျအဆငျ့ သာ ရှိပွီး Protocol အရ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးအောကျတှငျရှိနသေညျ။ မွနျမာ နိုငျငံ၏ ပွဿနာကို လာရောကျလလေ့ာသူ သံအမတျမြားက အဆငျ့မွငျ့ဝနျကွီး တဈဦးပွောဆို ခြိနျ နားမထောငျလိုဘဲ ထပွနျမညျပွုလုပျခွငျးက နိုငျငံတျောနှငျ့ အစိုးရကို စျောကား ခွငျးဖွဈပသေညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး မွနျမာပွညျသူအားလုံးက လုံခွုံရေး ကောငျစီကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အပျေါ ဒေါသထှကျခဲ့ကွသညျ။
ကုလသမဂ်ဂတှငျ နှဈပေါငျးမြားစှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ဖူးသညျ့ ဒေါကျတာ ဒျေါရငျရငျ နှယျမှ UNSC ကိုယျစားလှယျမြားက မွနျမာနိုငျငံအကွီးအကဲမြားကို တငျးမာစှာ ဆကျဆံခွငျးသညျ နိုငျငံတျော၏ဂုဏျသိက်ခာကို စျောကားရာရောကျကွောငျး၊ ကုလ သမဂ်ဂမှတိုငျးပွညျတဈပွညျ၏ နိုငျငံရေးနှငျ့ပွညျတှငျးရေးကို ဝငျရောကျ စှကျဖကျလြှငျ ထိုတိုငျးပွညျသညျ ကောငျးလာနိုငျစရာမရှိသဖွငျ့ အလြှော့မပေးသငျ့ကွောငျး၊ ကုလ သမဂ်ဂ၏ သဘောသဘာဝသညျ အရှော့ပေးလေ ပိုပွီးလူပါးဝ အနိုငျကငျြ့လဖွေဈ ကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား အငျဒိုနီးရှား သမ်မတက UNHCR ကို နှငျထုတျသကဲ့သို့ နှငျထုတျသငျ့ကွောငျး Facebook မှတဈဆငျ့သတိပေးပွောဆိုခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ တရုတျနိုငျငံမှလညျး နှငျထုတျခဲ့ဖူး ကွောငျးနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂကွောငျ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှ အရှတေီ့မောဒသေပဲထှကျခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျ၊ ယူကိုဆလားဗီးယားနိုငျငံမှ ကိုဆိုဗိုပွညျနယျ ပဲ့ထှကျခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျမြားကို လညျး ဥပမာပေးပွောဆိုခဲ့သညျ။ ထိုသို့ပွောဆိုပွီး မကွာမီမှာပငျ ဒေါကျတာ ဒျေါရငျရငျနှယျမှာ Facebook ၏ သတိပေးခွငျးကို ခံခဲ့ရသညျ။
ပွဿနာတဈခုကို ဝငျမပါခငျ သမိုငျးနှငျ့ဇဈမွဈသိဖို့အရငျလလေ့ာသငျ့
UNSC အဓိက ဦးတညျသညျ့ မွနျမာနိုငျငံအနောကျပိုငျး ရခိုငျပွညျနယျမှ ဘင်ျဂါလီ ပွဿနာသညျပွညျတှငျးရေးပွဿနာတဈခုသာဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာနိုငျငံကသာကိုငျတှယျ ဖွရှေငျးရမညျ့ ကိစ်စဖွဈသညျ။ ကုလသမဂ်ဂအနဖွေငျ့ ဝငျရောကျစှကျဖကျလိုလငျ့ကစား ပွဿနာကို အသီးအပှငျ့ကိုသာ မကွညျ့ဘဲ အမွဈကိုပါ ကွညျ့ဖို့လိုလိမျ့မညျဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ဘင်ျဂါလီမြား ရောကျရှိလာခွငျးမှာ ကိုလိုနီခတျေက အင်ျဂလိပျတို့ ချေါသှငျးလာသညျ့ လယျကူလီမြားမှ အစပွုခဲ့သညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ ၎င်းငျးတို့သညျ အငျအားကွီးလာပွီး အကွမျးဖကျမှုမြား လုပျကိုငျလာခဲ့ကွသညျ။
၁၉၈၈ ခုနှဈတှငျ လုံခွုံရေးအငျအားနညျးနမှေုကို အခှငျ့ကောငျးယူကာ ဘင်ျဂါလီမြားက မောငျတောမွို့ကို သိမျးပိုကျ ရနျကွိုးစားခဲ့ဖူးသညျ။ ၁၉၉၈ ခုနှဈတှငျလညျး (၎င်းငျးတို့ အချေါ) ရိုဟငျဂြာ လှတျမွောကျရေးအဖှဲ့(RLO) မှ မောငျတောမွို့သို့ ဝငျရောကျခဲ့ကာ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးမြားကို ဖကျြဆီးခွငျး၊ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားနထေိုငျသော ရပျကှကျမြားကို မီးရှို့ခွငျး၊ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြားကို သတျဖွတျခွငျးတို့ကို ပွုလုပျ ခဲ့ကာ မောငျတောကို သိမျးယူရနျကွိုးစားခဲ့သေးသညျ။ ၂၀၁၇ ဩဂုတျလတှငျမူ ARSA သောငျးကွမျးသူအဖှဲ့မှ ရဲကငျးစခနျး ၃၀ ကို တဈနတေ့ညျး တဈခြိနျတညျး ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျခဲ့ရာ အပွဈမဲ့ ပွညျသူအမြားအပွား သဆေုံးဒဏျရာရခဲ့ရသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၃၀ ရကျအထိ မွနျမာတိုငျးရငျးသား ၇၂ ဦးသဆေုံးခဲ့ရပွီး ၁၃ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့သညျ။ လကျရှိဘင်ျဂလားဒရှေျ့သို့ ဒုက်ခသညျမြား ထှကျပွေးနခွေငျးမှာ လညျး ၂၀၁၇ ဩဂုတျလတိုကျခိုကျမှု၏ နောကျဆကျတှဲဖွဈသညျ။ လကျရှိဖွဈနသေညျ့ ပွဿနာမှာ ထှကျပွေးသညျ့ပွဿနာနှငျ့ ထှကျပွေးသူကိုလကျခံရမညျ့ ပွဿနာသာ မဟုတျဘဲ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျခွငျး၊ နယျမွပေိုငျဆိုငျလိုခွငျး၊ အခြုပျအခွာ အာဏာထိခိုကျခွငျးနှငျ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေး ပွဿနာဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုး
UNSC ကိုယျစားလှယျမြား၏ မွနျမာနိုငျငံခရီးစဉျသညျ ရလဒျကောငျးမထှကျသညျ့ ခရီးစဉျဟု ဆိုနိုငျသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျးသို့ ပွဿနာဖွရှေငျးရနျ လာရောကျလလေ့ာ ခွငျးမဟုတျဘဲ ၎င်းငျးတို့တရားသေ ဆုတျကိုငျထားသညျ့ မူဝါဒကို လာရောကျပွော ဆိုခွငျး၊ မွနျမာတာဝနျရှိသူမြားကို တရားခံသဖှယျ စဈဆေးမေးမွနျးခွငျးသာ ဖွဈ သညျ။ ဖွဈစဉျအကွောငျးအရာနှငျ့ပတျသကျပွီး ၎င်းငျးတို့တှငျ Input ရှိပွီးသားဖွဈပွီး တဈဖကျသတျ Input မြားကို လကျကိုငျထားကာ တဈဖကျသတျ Output ကိုသာ တစိုကျမကျမကျ ပွောဆိုခဲ့ကွသညျ။ အသုံးခခြံမီဒီယာမြား၊ ငိုပွသူမြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ထံသို့ သတငျး စကားရောကျအောငျ တငျပွနိုငျသူမြားထံမှ သတငျးကိုသာ အတညျယူကာ မွနျမာနိုငျငံကို တရားခံအဖွဈသာ ရှုမွငျနကွေသညျ။ မွနျမာနိုငျငံမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့သျောလညျး မွနျမာဘကျမှ ပွောဆိုသမြှကို နားမထောငျဘဲ ၎င်းငျးတို့ပွောခငျြ သညျမြားကိုသာ ပွောဆိုသှားကွသညျ။ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ဒသေခံ တိုငျးရငျးသားတို့နှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့သျောလညျး ပွောသမြှစကားမြားကို အလေးအနကျ ထားခွငျး မရှိခဲ့ကွခြေ။ မွနျမာနိုငျငံကိုကူညီရနျဟု မကွာခဏပွောဆိုလရှေိ့ကွသျော လညျး မွနျမာ နိုငျငံအပျေါ စတေနာအမှနျမရှိကွပေ။ ခရီးစဉျကိုလညျး ကူဝိတျနိုငျငံမှ ထောကျပံ့ပေးသညျ့ အထူးလယောဉျကွီးဖွငျ့ ပြျောပှဲစားထှကျသကဲ့သို့ ပြျောရှငျစှာ ခရီးထှကျနကွေသညျကို တှရေ့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံသို့လာသညျဖွဈစေ၊ မလာသညျ ဖွဈစေ၊ မွနျမာဘကျမှ မညျသို့ပွောသညျဖွဈစေ ၎င်းငျးတို့၏အမွငျ၊ အတှေး၊ သဘော ထားနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားက ရှိပွီးသားဖွဈရာ UNSC အဖှဲ့ဝငျမြား ခရီးစဉျသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကောငျးကြိုးမရှိသညျ့ ခရီးစဉျဟုသာ သတျမှတျရပလေိမျ့မညျ။
UNSC ခရီးစဉျသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကောငျးကြိုးမရခဲ့သျောလညျး သငျခနျးစာ ယူစရာ မြားစှာ ရရှိခဲ့သညျ။ ပထမအခကျြအနဖွေငျ့ UNSC မှ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ထား ရှိသညျ့ သဘောထားမှနျကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျးသိရှိခဲ့ရသလို ယငျးသဘောထားမှာ ခိုငျမာအမွဈတှယျနပွေီး ပွောငျးလဲဖို့ခကျသညျကို မွနျမာဘကျက ကောငျးစှာသဘော ပေါကျခဲ့ကွရသညျ။
ဒုတိယအခကျြမှာ မွနျမာအစိုးရ တာဝနျရှိသူမြား၏ အားနညျးခကျြဟု ဆိုနိုငျသညျ။ ပွညျသူကရှေးခယျြတငျမွှောကျထားသညျ့ အစိုးရလကျထကျ လူမှုရေးရာနှငျ့ နိုငျငံ တကာရေးရာ ကြှမျးကငျြသူမြားက သံတမနျမြားကို နားဝငျအောငျ မရှငျးပွနိုငျဘဲ ထပွနျအောငျ လုပျခဲ့ခွငျးက ရုပျဆိုးအကညျြးတနျစသေညျ့ ဖွဈစဉျဖွဈသညျ။ မွနျမာ နိုငျငံမှ တာဝနျရှိသူမြားအနဖွေငျ့ လူထုဆကျသှယျရေးနညျးနာ (Public Relation) အတတျပညာလိုအပျနပွေီး သံတမနျမြားကို မညျသို့ ဆကျဆံစညျးရုံးရမညျ၊ မိမိနိုငျငံ ဘကျမှ အခွအေနမှေနျမြားကို နားဝငျသှားစရေနျ မညျသို့ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိတငျပွ မညျ၊ ကနြေပျလကျခံသှားစရေနျ မညျသို့လကျတှေ့ ဆောငျရှကျလုပျကိုငျနကွေောငျး ပွသမညျ ဆိုသော သံတမနျဆနျဆနျ ဆကျဆံပွောဆို စညျးရုံးသညျ့ နညျးပရိယာယျမြား၊ အရညျ အခငျြးမြား ရှိဖို့လိုအပျနသေေးကွောငျး တှနေို့ငျသညျ။ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျ ရုပျအလောငျး မြား တူးဖျောရရှိခဲ့မှု၊ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား ၅ ဦး၊ မွိုတိုငျးရငျးသား ၇ ဦးနှငျ့ ဒိုငျးနကျ တိုငျးရငျးသား ၇ ဦးတို့ ရကျရကျစကျစကျ အသတျခံခဲ့ရမှုမြားကို ကုလသမဂ်ဂသံတမနျ မြား မသိရှိကွခွငျးမှာ အစိုးရ၏အားနညျးခကျြဖွဈသညျ။ ယငျးအားနညျးခကျြ ကွောငျ့ လညျး အိမျကှငျးမှာပငျ ခံစဈနှငျ့ကစားနရေသညျ့ အဖွဈမြိုးသို့ ရောကျခဲ့ရခွငျးဖွဈ သညျ။
တတိယအခကျြမှာ မိမိတို့ဘကျမှ NGO မြား၊ CSO မြား အခိုငျအမာမရှိခွငျးဖွဈ သညျ။ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ ကိုယျစားလှယျမြားသညျ နပွေညျတျောနှငျ့ စဈတှတေို့တှငျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ယငျးတို့၏ အသံကို နား ထောငျခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော တကျရောကျခဲ့ကွသညျ့ NGO, INGO နှငျ့ CSO အဖှဲ့ အခြို့မှာ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးမြားက ကြောထောကျနောကျခံပေးထားသူမြား ဖွဈနရော ဘင်ျဂါလီတို့ဘကျမှသာ ရပျတညျပွောကွားခဲ့သညျကို တှရေ့သညျ။ သို့ ဖွဈရာ လောငျးရိပျကငျးပွီး အမှနျတရားအတှကျ ရပျတညျသညျ့ အရပျဘကျ လူမှုအဖှဲ့အစညျး အမြားအပွား မွနျမာ့လူ့ဘောငျတှငျ လိုအပျနကွေောငျး သငျခနျးစာယူရမညျဖွဈသညျ။
UNSC ခရီးစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အဓိက စိုးရိမျစရာမှာ ဒုက်ခသညျမြား ပွနျပို့ရေးကိစ်စ ထကျ ကြျောလှနျသညျ့ ပွောဆိုစှကျဖကျမှုမြားဖွဈပွီး အရေးယူသညျ့လမျးကွောငျးပျေါ သို့ မရမကစှဲတငျနသေညျ့ အပွုအမူမြားပငျဖွဈသညျ။ ၂ ရကျတာခရီးစဉျအတှငျး ဖွဈပကျြခဲ့သမြှနှငျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောဆိုခဲ့သမြှအား ဆကျစပျသုံးသပျ ကွညျ့ပါက ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ မူလစီစဉျထားသညျ့ အစီအစဉျမြားကိုသာ အရှိနျအဟုနျ ဖွငျ့ ဆကျလုပျသှားလိမျ့မညျဟု ကောကျခကျြခနြိုငျသညျ။ အထူးသဖွငျ့ လာမညျ့ မုတျသုနျ ရာသီအတှငျး ရလှေမျးမိုးမှုမြားကွောငျ့ ဘင်ျဂါလီမြား ကွုံတှရေ့သညျ့အခွအေနမြေား၊ ရောဂါခံစားမှုမြားနှငျ့ သကေပြေကျြစီးမှုမြားအား အကွောငျးပွု၍ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေး ကောငျစီတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ အဆိုမူကွမျးတဈရပျ ခမြှတျအရေးယူနိုငျရေး ဖိအားပေးဆောငျရှကျခွငျးမြား ပွုလုပျလာနိုငျသညျ။
အလားတူ ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၅ ရကျ၊ စနနေကေ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ဒါကာမွို့မှာ စတငျ ကငျြးပတဲ့ အစ်စလာမျနိုငျငံမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးအဖှဲ့ OIC နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မြား ညီလာခံတှငျ ဘင်ျဂါလီမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာအစိုးရအပျေါ ပွငျးထနျစှာအရေး ယူဖို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပွီး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဝနျကွီးခြုပျ Sheikh Hasina က OIC နိုငျငံတှေ အနနေဲ့ ရိုဟငျဂြာတှေ နရေပျပွနျရေးအတှကျ မွနျမာအစိုးရကို ဖိအားပေးကွဖို့ ပွော ကွားခဲ့ပွနျသညျ။
ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ၊ OIC နှငျ့ အနောကျနိုငျငံမြားသညျ ဒုက်ခသညျပွနျပို့ရေး ပွဿနာထကျ ကြျောလှနျသော ဖိအားမြားကိုပေးလာကွပွီး အနာဂတျကို မြှျောတှေး ကာ ကူညီရမညျ့အစား အတိတျဖွဈစဉျမြားအတှကျ စဈဆေးအရေးယူရနျ ပိုမိုအလေး ပေးလာကွသညျ။ အကွမျးဖကျသမားမြား၏ အကွမျးဖကျလုပျရပျမြား၊ ဟိန်ဒူဘာသာ ဝငျ ၅၂ ဦး အသတျခံရမှု၊ ရခိုငျ/မွို/ဒိုငျးနကျ စသညျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသား ၁၉ ဦး အသတျခံရမှု၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၁၁ ဦးနှငျ့ တပျမတျောသား ၂ ဦး အသတျခံခဲ့ရမှုတို့ကို ပွညျဖုံးကားခပြွီး လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့မြား၏ အကွမျးဖကျသမားမြား နှိမျနှငျးရေး ဆောငျ ရှကျမှုမြားအပျေါ စဈဆေးမေးမွနျးအမှုဆငျလာကွသညျ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာရာဇဝတျ ခုံရုံး(ICC) နှငျ့လညျးကောငျး၊ R2P နှငျ့လညျးကောငျး ခွိမျးခွောကျမှုမြား ပွုလုပျလာ ကွသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ မလိုအပျဘဲ တပျမတျောအပျေါ ဖိအားအလှနျ အကြှံပေးမှုမြား သညျ ယူဂိုဆလားဗီးယားစဈပှဲအတှငျး ယူဂိုဆလားဗီးယားတပျမတျောကို ဖိအားပေးမှု မြားနှငျ့ အလားသဏ်ဌာနျတူနသေညျ။ ယငျးအခကျြသညျ နိုငျငံမတညျ မငွိမျဖွဈရုံမြှမက အစိတျစိတျအမွှာမွှာပွိုကှဲသှားနိုငျသလို စဈမီးကွီး ဟုနျးဟုနျးတောကျကာ ဆီးရီးယား နှငျ့ အာဖဂနျနစ်စတနျကဲ့သို့ စဈမွပွေငျလညျး ဖွဈသှားနိုငျသညျ။ တပျမတျောအပျေါကို ပဈမှတျထား ဦးတညျတိုကျခိုကျသညျဟု ဆိုသျောလညျး နိုငျငံတျောနှငျ့အစိုးရပါ သိက်ခာ ကသြညျ့အပွငျ အကြိုးဆကျကို ပွညျသူ ၅၂ သနျးလုံးက ခံစားရမညျဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာတညျသရှေ့ မွနျမာနိုငျငံတညျတံ့စရေေး၊ မွနျမာ့မွကေို နိုငျငံတကာ စဈမွပွေငျ မဖွဈစရေေးနှငျ့ ရခိုငျပွဿနာ၏ အဆုံးသတျက မွနျမာနိုငျငံ၏ နိဂုံးမဖွဈရနျမှာ ယနေ့ မွနျမာပွညျသူအားလုံး၏ တာဝနျဖွဈပသေညျ။ အစိုးရဘကျမှလညျး ကစားကှကျ ပွောငျးပွီး ကစားဖို့လိုအပျသလို ပွညျသူမြားဘကျမှလညျး အစှဲအမြိုးမြိုးဖွငျ့ အိမျကွကျခငျြး ခှပျနမှေုကိုရပျတနျ့ကာ စညျးလုံးညီညှတျစှာဖွငျ့ တုံ့ပွနျရမညျ့အခြိနျဖွဈ ပါကွောငျး အကွံပွုတိုကျတှနျးလိုကျရပါသညျ။
UNSC ၏ ၂ ရက်တာခရီးစဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့နှင့် မေလ ၁ ရက်နေ့တို့တွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ကျော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကို Peru သံအမတ်ကြီး Gustavo Adolfo Meza Cuadra Velasqez မှ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံနှင့် အလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်များလိုက်ပါခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၃၀ ရက် နေ့တွင်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့ အပြင် နေပြည်တော်ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ညပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအချို့နှင့် အလုပ်သဘော ညစာစားသုံးခဲ့ကြသည်။ မေလ ၁ ရက် နေ့တွင် မောင်တော ဒေသများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းအချို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကာ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မူ အချိန်မရဟု အကြောင်းပြကာ တွေ့ဆုံသွားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံ၊ အလှည့်ကျ အဖွဲ့ ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ စုစုပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေ ရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၁၉၃ နိုင်ငံတို့မှ ၁၀ နိုင်ငံစီ အလှည့်ကျ ပါဝင်ခွင့်ရ သည်။ လက်ရှိ အလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံတို့မှာ ဘိုလစ်ဗီးယား၊ အိုင်ဗရီကို့စ်၊ အီကွေ တိုရီရယ်ဂီနီ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ကာဇက်စတန်၊ ကူဝိတ်၊ နယ်သာလန်၊ ပီရူး၊ ပိုလန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်တွင် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံမှ ဗီတို အာဏာဖြင့် ပယ်ချခွင့်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံက ပယ်ချခဲ့လျှင်ပင် အဖွဲ့ဝင် ၁၄ နိုင်ငံ သဘောတူ သည့်တိုင်အောင် သဲထဲရေသွန်ဖြစ်စေသည့် မူဝါဒကိုကျင့်သုံးထားသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်မလာခင် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ဦးစွာသွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Cox’s Bazar မြို့ သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Kutupalong ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် တန်ဘရူး နယ်စပ်အနီးရှိ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မျဉ်းတွင် ယာယီနေထိုင်လျက်ရှိသူများထံသို့ သွား ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံထဲက ထွက်ခွာလာပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင်သူ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေကို နေရပ်ပြန်ခေါ်ရေး မြန်မာကို ဖိအားပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ်မှ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ သံတမန်များ ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့မထွက်ခွာမီ ဒါကာမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များ၏ ငိုကြွေးပြမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြစ်ပုံချ ပြောဆိုမှုတို့ကို တစ်ဖက်သတ်နားထောင်ပြီးနောက် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ မီဒီယာသို့ ပြောဆိုမှုများကလည်း တစ်ဖက်သတ်များသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာရင်တော့ မြန်မာဘက်က တာဝန်ရှိသူများအသံ၊ ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအသံ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအသံ နှင့် နယ်ခံမျက်မြင်များ၏ အသံကိုနားထောင်ပြီးပါက ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တို့ အနေဖြင့် နှစ်ဘက်မျှမျှတတ ပြန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ မိသည်။
UNSC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည့်နေ့တွင်ပင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံကာ ပြောဆိုရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ ကိုဖီအာနန်၏အကြံပြု ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည့် အပြင် ကုလသမဂ္ဂနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်အကြောင်း၊ ကုလ သမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အေဂျင်စီများနှင့် ထိတွေ့ဆောင်ရွက်သွားမည့်အကြောင်း၊ ကုလ သမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံး(UNHCR)တို့နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသွားမည့် အကြောင်းများကိုပါ ပြောဆိုခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများမှလည်း UNSC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ၊ ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်လက်ခံနိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် အခြားကိစ္စ အများအပြားကို ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းစာအုပ်များကိုပါ ပေးအပ် ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေမှလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကာ ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ UEHRD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးတို့မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးသည်။
ပြင်ပ ပကတိအရှိတရားမှန်ကို လက်တွေ့ပြသ
မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကို ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်း၊ လှဖိုးခေါင် ကြားစခန်းတို့ရှိ ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားရေး ဆောင်ရွက်ထားမှုများနှင့် ရွှေစား၊ သစ်ဆုံးနားခွဆုံ၊ အိုးထိန်း၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ၊ ငခူရ၊ လှဖိုးခေါင်၊ ရွှေဇား၊ ပန်းတောပြင် စသည့် ကျေးရွာများကို ပြသပေးခဲ့သည်။ ပန်းတောပြင်ရွာရှိ ဘင်္ဂါလီများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဘင်္ဂါလီများမှ ၎င်းတို့၏ကျေးရွာများကို မီးရှို့သူများသည် တပ်မတော်နှင့် ရခိုင်လူမျိုး များဖြစ်သည်ဟု ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်ထားသည့်အတိုင်း "Military Military" ဆိုသောစကားကိုသာ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ကြားသိရသည်။ ထို့အပြင် UNSC အဖွဲ့များ အပြန်တွင် ပန်းတောပြင်ရွာသားတစ်ဦးမှ စာတစ်စောင်ပေးခဲ့သည်ဟုသိရပြီး ယင်း စာထဲတွင်ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ပေးလိုက် သည့် စာပါအကြောင်းအရာများနှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟုလည်း ကြားသိရပါသည်။ ထို့နောက် UNSC သံတမန်အဖွဲ့ဝင်များသည် မောင်တောထွေအုပ်ရုံးတွင် ဟိန္ဒူ မိသားစု ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ပန်းတောပြင် မွတ်စလင်ကျေးရွာများသို့ သွားရောက် လေ့လာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့် စစ်တွေ မြို့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။
UNSC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မေလ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ မပြန်ခင် နေပြည် တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းသတင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှ ပြောဆိုချက်များသည် ယခင်အတိုင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပေ။ ၎င်းတို့ အဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာဘက်က ဆွေးနွေးခဲ့မှုများကို လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိဘဲ မူလအတိုင်းသာ ပြောဆိုအပြစ်တင် တိုက်တွန်းသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အထူး သဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Karen Pierce သည် ပြဿနာဖြေရှင်း ရေးထက် အရေးယူရေးကိုသာ ဦးစား ပေးနေခြင်းအား စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေ့ခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး တို့၏ သတင်းဖော်ပြချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့မှုများသည် လွန်စွာ ပြည့်စုံမျှတပြီး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမည့် အထောက်အကူများဟု ဆိုနိုင်သည်။ အလားတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ ပြောဆိုမှုများကလည်း လက်ခံစဉ်းစားရမည့် အချက်များသာဖြစ်ပေ သည်။ သို့သော် UNSC ကိုယ်စားလှယ်များက နှစ်ဘက်ညီညွတ်မျှတစွာ နားထောင် စဉ်းစားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဖက်သတ် စကားများကိုသာ နားထောင်ကာ တစ်ဖက်သတ် လွဲမှားစွာ ယုံကြည် လက်ခံထား ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများမှ ရှင်းပြနေချိန်တွင် ပြဿနာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အာရုံစိုက်နားထောင် ရမည့်အစား မထီမဲ့မြင်အပြုအမူများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော် တင့်ဆွေနဲ့ UEHRD အဖွဲ့ဝင်များပြောပြီးနောက် ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပြောဆို ချိန်တွင် မက်တပ်ရပ်ကာ ထပြန်မည့်ပုံစံ ပြောဆိုခဲ့သည်။ နားမထောင်ချင်သည့်ပုံစံ၊ မလိုအပ်သည့်ပုံစံမျိုးပြသခဲ့ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂသံတမန်ဟူသည်မှာ သံအမတ်အဆင့် သာ ရှိပြီး Protocol အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအောက်တွင်ရှိနေသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ပြဿနာကို လာရောက်လေ့လာသူ သံအမတ်များက အဆင့်မြင့်ဝန်ကြီး တစ်ဦးပြောဆို ချိန် နားမထောင်လိုဘဲ ထပြန်မည်ပြုလုပ်ခြင်းက နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရကို စော်ကား ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူအားလုံးက လုံခြုံရေး ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အပေါ် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင် နွယ်မှ UNSC ကိုယ်စားလှယ်များက မြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲများကို တင်းမာစွာ ဆက်ဆံခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားရာရောက်ကြောင်း၊ ကုလ သမဂ္ဂမှတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ နိုင်ငံရေးနှင့်ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်လျှင် ထိုတိုင်းပြည်သည် ကောင်းလာနိုင်စရာမရှိသဖြင့် အလျှော့မပေးသင့်ကြောင်း၊ ကုလ သမဂ္ဂ၏ သဘောသဘာဝသည် အရှော့ပေးလေ ပိုပြီးလူပါးဝ အနိုင်ကျင့်လေဖြစ် ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတက UNHCR ကို နှင်ထုတ်သကဲ့သို့ နှင်ထုတ်သင့်ကြောင်း Facebook မှတစ်ဆင့်သတိပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံမှလည်း နှင်ထုတ်ခဲ့ဖူး ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အရှေ့တီမောဒေသပဲထွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၊ ယူကိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံမှ ကိုဆိုဗိုပြည်နယ် ပဲ့ထွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များကို လည်း ဥပမာပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုပြီး မကြာမီမှာပင် ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်မှာ Facebook ၏ သတိပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ပြဿနာတစ်ခုကို ဝင်မပါခင် သမိုင်းနှင့်ဇစ်မြစ်သိဖို့အရင်လေ့လာသင့်
UNSC အဓိက ဦးတည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာသည်ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကသာကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုလင့်ကစား ပြဿနာကို အသီးအပွင့်ကိုသာ မကြည့်ဘဲ အမြစ်ကိုပါ ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဘင်္ဂါလီများ ရောက်ရှိလာခြင်းမှာ ကိုလိုနီခေတ်က အင်္ဂလိပ်တို့ ခေါ်သွင်းလာသည့် လယ်ကူလီများမှ အစပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည် အင်အားကြီးလာပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လုံခြုံရေးအင်အားနည်းနေမှုကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ဘင်္ဂါလီများက မောင်တောမြို့ကို သိမ်းပိုက် ရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်လည်း (၎င်းတို့ အခေါ်) ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(RLO) မှ မောင်တောမြို့သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနေထိုင်သော ရပ်ကွက်များကို မီးရှို့ခြင်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ခဲ့ကာ မောင်တောကို သိမ်းယူရန်ကြိုးစားခဲ့သေးသည်။ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လတွင်မူ ARSA သောင်းကြမ်းသူအဖွဲ့မှ ရဲကင်းစခန်း ၃၀ ကို တစ်နေ့တည်း တစ်ချိန်တည်း ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူအများအပြား သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်အထိ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၇၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးနေခြင်းမှာ လည်း ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လတိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိဖြစ်နေသည့် ပြဿနာမှာ ထွက်ပြေးသည့်ပြဿနာနှင့် ထွက်ပြေးသူကိုလက်ခံရမည့် ပြဿနာသာ မဟုတ်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်လိုခြင်း၊ အချုပ်အခြာ အာဏာထိခိုက်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး
UNSC ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ရလဒ်ကောင်းမထွက်သည့် ခရီးစဉ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ပြဿနာဖြေရှင်းရန် လာရောက်လေ့လာ ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့တရားသေ ဆုတ်ကိုင်ထားသည့် မူဝါဒကို လာရောက်ပြော ဆိုခြင်း၊ မြန်မာတာဝန်ရှိသူများကို တရားခံသဖွယ် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းသာ ဖြစ် သည်။ ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့တွင် Input ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သတ် Input များကို လက်ကိုင်ထားကာ တစ်ဖက်သတ် Output ကိုသာ တစိုက်မက်မက် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အသုံးချခံမီဒီယာများ၊ ငိုပြသူများနှင့် ၎င်းတို့ထံသို့ သတင်း စကားရောက်အောင် တင်ပြနိုင်သူများထံမှ သတင်းကိုသာ အတည်ယူကာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားခံအဖြစ်သာ ရှုမြင်နေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း မြန်မာဘက်မှ ပြောဆိုသမျှကို နားမထောင်ဘဲ ၎င်းတို့ပြောချင် သည်များကိုသာ ပြောဆိုသွားကြသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း ပြောသမျှစကားများကို အလေးအနက် ထားခြင်း မရှိခဲ့ကြချေ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီရန်ဟု မကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိကြသော် လည်း မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် စေတနာအမှန်မရှိကြပေ။ ခရီးစဉ်ကိုလည်း ကူဝိတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် အထူးလေယာဉ်ကြီးဖြင့် ပျော်ပွဲစားထွက်သကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးထွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာသည်ဖြစ်စေ၊ မလာသည် ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘက်မှ မည်သို့ပြောသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏အမြင်၊ အတွေး၊ သဘော ထားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များက ရှိပြီးသားဖြစ်ရာ UNSC အဖွဲ့ဝင်များ ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးမရှိသည့် ခရီးစဉ်ဟုသာ သတ်မှတ်ရပေလိမ့်မည်။
UNSC ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးမရခဲ့သော်လည်း သင်ခန်းစာ ယူစရာ များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် UNSC မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထား ရှိသည့် သဘောထားမှန်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိရှိခဲ့ရသလို ယင်းသဘောထားမှာ ခိုင်မာအမြစ်တွယ်နေပြီး ပြောင်းလဲဖို့ခက်သည်ကို မြန်မာဘက်က ကောင်းစွာသဘော ပေါက်ခဲ့ကြရသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ၏ အားနည်းချက်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရလက်ထက် လူမှုရေးရာနှင့် နိုင်ငံ တကာရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများက သံတမန်များကို နားဝင်အောင် မရှင်းပြနိုင်ဘဲ ထပြန်အောင် လုပ်ခဲ့ခြင်းက ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စေသည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် လူထုဆက်သွယ်ရေးနည်းနာ (Public Relation) အတတ်ပညာလိုအပ်နေပြီး သံတမန်များကို မည်သို့ ဆက်ဆံစည်းရုံးရမည်၊ မိမိနိုင်ငံ ဘက်မှ အခြေအနေမှန်များကို နားဝင်သွားစေရန် မည်သို့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိတင်ပြ မည်၊ ကျေနပ်လက်ခံသွားစေရန် မည်သို့လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ပြသမည် ဆိုသော သံတမန်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံပြောဆို စည်းရုံးသည့် နည်းပရိယာယ်များ၊ အရည် အချင်းများ ရှိဖို့လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ရုပ်အလောင်း များ တူးဖော်ရရှိခဲ့မှု၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၅ ဦး၊ မြိုတိုင်းရင်းသား ၇ ဦးနှင့် ဒိုင်းနက် တိုင်းရင်းသား ၇ ဦးတို့ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရမှုများကို ကုလသမဂ္ဂသံတမန် များ မသိရှိကြခြင်းမှာ အစိုးရ၏အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအားနည်းချက် ကြောင့် လည်း အိမ်ကွင်းမှာပင် ခံစစ်နှင့်ကစားနေရသည့် အဖြစ်မျိုးသို့ ရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် သည်။
တတိယအချက်မှာ မိမိတို့ဘက်မှ NGO များ၊ CSO များ အခိုင်အမာမရှိခြင်းဖြစ် သည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်များသည် နေပြည်တော်နှင့် စစ်တွေတို့တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းတို့၏ အသံကို နား ထောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် NGO, INGO နှင့် CSO အဖွဲ့ အချို့မှာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသူများ ဖြစ်နေရာ ဘင်္ဂါလီတို့ဘက်မှသာ ရပ်တည်ပြောကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ လောင်းရိပ်ကင်းပြီး အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်သည့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အများအပြား မြန်မာ့လူ့ဘောင်တွင် လိုအပ်နေကြောင်း သင်ခန်းစာယူရမည်ဖြစ်သည်။
UNSC ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိက စိုးရိမ်စရာမှာ ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့ရေးကိစ္စ ထက် ကျော်လွန်သည့် ပြောဆိုစွက်ဖက်မှုများဖြစ်ပြီး အရေးယူသည့်လမ်းကြောင်းပေါ် သို့ မရမကစွဲတင်နေသည့် အပြုအမူများပင်ဖြစ်သည်။ ၂ ရက်တာခရီးစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သမျှအား ဆက်စပ်သုံးသပ် ကြည့်ပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် မူလစီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်များကိုသာ အရှိန်အဟုန် ဖြင့် ဆက်လုပ်သွားလိမ့်မည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် လာမည့် မုတ်သုန် ရာသီအတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ဘင်္ဂါလီများ ကြုံတွေ့ရသည့်အခြေအနေများ၊ ရောဂါခံစားမှုများနှင့် သေကျေပျက်စီးမှုများအား အကြောင်းပြု၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုမူကြမ်းတစ်ရပ် ချမှတ်အရေးယူနိုင်ရေး ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာနိုင်သည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၅ ရက်၊ စနေနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာမြို့မှာ စတင် ကျင်းပတဲ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး များ ညီလာခံတွင် ဘင်္ဂါလီများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရအပေါ် ပြင်းထန်စွာအရေး ယူဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina က OIC နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပေးကြဖို့ ပြော ကြားခဲ့ပြန်သည်။
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၊ OIC နှင့် အနောက်နိုင်ငံများသည် ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး ပြဿနာထက် ကျော်လွန်သော ဖိအားများကိုပေးလာကြပြီး အနာဂတ်ကို မျှော်တွေး ကာ ကူညီရမည့်အစား အတိတ်ဖြစ်စဉ်များအတွက် စစ်ဆေးအရေးယူရန် ပိုမိုအလေး ပေးလာကြသည်။ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ဝင် ၅၂ ဦး အသတ်ခံရမှု၊ ရခိုင်/မြို/ဒိုင်းနက် စသည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ၁၉ ဦး အသတ်ခံရမှု၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးနှင့် တပ်မတော်သား ၂ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရမှုတို့ကို ပြည်ဖုံးကားချပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်သမားများ နှိမ်နှင်းရေး ဆောင် ရွက်မှုများအပေါ် စစ်ဆေးမေးမြန်းအမှုဆင်လာကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ် ခုံရုံး(ICC) နှင့်လည်းကောင်း၊ R2P နှင့်လည်းကောင်း ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်လာ ကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မလိုအပ်ဘဲ တပ်မတော်အပေါ် ဖိအားအလွန် အကျွံပေးမှုများ သည် ယူဂိုဆလားဗီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ယူဂိုဆလားဗီးယားတပ်မတော်ကို ဖိအားပေးမှု များနှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူနေသည်။ ယင်းအချက်သည် နိုင်ငံမတည် မငြိမ်ဖြစ်ရုံမျှမက အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာပြိုကွဲသွားနိုင်သလို စစ်မီးကြီး ဟုန်းဟုန်းတောက်ကာ ဆီးရီးယား နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်ကဲ့သို့ စစ်မြေပြင်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ တပ်မတော်အပေါ်ကို ပစ်မှတ်ထား ဦးတည်တိုက်ခိုက်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရပါ သိက္ခာ ကျသည့်အပြင် အကျိုးဆက်ကို ပြည်သူ ၅၂ သန်းလုံးက ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ မြန်မာနိုင်ငံတည်တံ့စေရေး၊ မြန်မာ့မြေကို နိုင်ငံတကာ စစ်မြေပြင် မဖြစ်စေရေးနှင့် ရခိုင်ပြဿနာ၏ အဆုံးသတ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိဂုံးမဖြစ်ရန်မှာ ယနေ့ မြန်မာပြည်သူအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပေသည်။ အစိုးရဘက်မှလည်း ကစားကွက် ပြောင်းပြီး ကစားဖို့လိုအပ်သလို ပြည်သူများဘက်မှလည်း အစွဲအမျိုးမျိုးဖြင့် အိမ်ကြက်ချင်း ခွပ်နေမှုကိုရပ်တန့်ကာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် တုံ့ပြန်ရမည့်အချိန်ဖြစ် ပါကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Facebook ကို စှနျ့ခှာသငျ့ပွီလား ~ Facebook ကို စွန့်ခွာသင့်ပြီလား
Tesla နဲ့ Mozilla လို နာမညျကြျော နညျးပညာလုပျငနျးကွီးတှကေ Cambridge Analytica အရှုပျတျောပုံနဲ့ ပတျသတျပွီး Facebook ကို သပိတျမှောကျလိုကျကွပါတယျ။ Tesla ရဲ့ အကွီးအကဲ Elon Musk ဟာဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ ကားကုမ်ပဏီ Tesla နဲ့ အာကာသသယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး SpaceX တို့ရဲ့ Facebook page တှကေို ဖကျြခလြိုကျတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Facebook ဟာ သနျးဆယျနဲ့ခြီ Like လုပျထားတဲ့ Page တဈခြို့ကို ဆုံးရှုံးသှားပါတယျ။
Mozilla ကတော့ သူ့ Browser ပျေါကနေ အသုံးပွုမယျဆိုရငျ Facebook ရဲ့ ကွျောငွာတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာမဟုတျပဲ ပိတျပငျထားမယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဂြာမနီအခွစေိုကျ Commerzbank နဲ့ အီလကျထရှနျနဈပစ်စညျးထုတျလုပျသူ Sonos တို့ကလညျး Facebook မှာ ကွျောငွာမထညျ့သှငျးတော့ဘူးလို့ ဆိုထားကွပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ WhatsApp ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Brian Acton ကလညျး #deletefacebook ဆိုတဲ့ Campaign ကို စတငျလိုကျပွီးတော့ ဒါဟာ Facebook ကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျလို့ ဆိုလိုကျပွနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈက Youtube ကို ကွျောငွာလုပျငနျး ၂၅၀ လောကျက သပိတျမှောကျတဲ့ အခွအေနနေဲ့ ယှဉျရငျ ဒါဟာအဆိုးရှားဆုံး အခွအေနတေော့မဟုတျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကှကျထဲမှာ ရှယျယာဈေးတှထေိုးကသြှားတာကွောငျ့ တဈပတျပတျအတှငျးမှာ ဒျေါလာ ၇၅ ဘီလီယံလောကျ ဆုံးရှုံးသှားတာကတော့ Facebook ကို အထိနာစပေါတယျ။
Cambridge Analytica ရဲ့ အခကျြအလကျအလှဲသုံးစားလုပျမှုပွဿနာအပွငျ စီးပှားရေးနယျပယျက ယိမျးယိုငျမှု အခွအေနတှေကွေောငျ့လညျး နိုငျငံတကာ Facebook သုံးစှဲသူတှကေတော့ Facebook အပျေါ ယုံကွညျမှုကဆြငျးလာပွီးတော့ ဆကျသုံးသငျ့မသုံးသငျ့ ဝိဝါဒကှဲစရာအခွအေနဖွေဈလာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအရှုပျတျောပုံ ပွဿနာတှမေဖွဈပှားခငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောကျတိုဘာလောကျကတညျးက စာရေးဆရာ စကော့တျ ဂယျလိုဝေးက သူ့ရဲ့ The Four ဆိုတဲ့စာအုပျမှာ Facebook ရဲ့ ဒီလို အခကျြအလကျအလှဲသုံးစားမှုတှရှေိနတေယျဆိုတာကို ကွိုတငျသတိပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ Cambridge Analytica ရဲ့အခကျြအလကျ အလှဲသုံးစားမှု အရှုပျတျောပုံ ပျါပေါကျလာတဲ့အခြိနျမှာမှဖွဈပါတယျ။ Cambridge Analytica ဟာ ၂၀၁၆ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲအပါအဝငျ ဖောကျသညျတဈခြို့ရဲ့ ကိုယျကြိုးအတှကျ အသုံးခဖြို့ Facebook သုံးစှဲသူ သနျး ၅၀ ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အလှဲသုံးစားပွုလုပျခဲ့တာပါ။
ဒီလိုလုပျဖို့အတှကျ Facebook ရဲ့ သဘောတူညီခကျြနဲ့ Facebook ပျေါကနတေဆငျ့ ‘personality test’ app တှကေို အသုံးခခြဲ့ပါတယျ။ ‘personality test’ app တှဆေိုတာက မိမိဘယျ Celebrity နဲ့တူသလဲတို့၊ ဘယျအသကျအရှယျမှာ သမေလဲတို့၊ ဘယျနာမညျကြျောပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ဆှေးမြိုးတျောစပျလဲတို့လိုမြိုး Profile ကို အခွခေံပွီး အပြျောသဘောဝငျရောကျစမျးသပျနိုငျတဲ့ Facebook app တှဖွေဈပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကနတေဆငျ့ ဘယျသူတှေ ဘာတှကေို လလေ့ာပွီး ဘာတှကေို နှဈသကျတယျဆိုတာကို သူတို့က ခိုးယူမှတျသားသှားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီလုပျဆောငျမှုကို ၂၀၁၅ ခုနှဈကတညျးက စတငျနတောဖွဈပွီးတော့ ကမ်ဘာတဈလှားက ရှေးကောကျပှဲအတျောမြားမြားနဲ့ ကွျောငွာလုပျငနျးတှမှော ပွနျလညျအသုံးခဖြို့ ရောငျးစားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီကနေ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာ ပမာဏအထိ အခကျြအလကျတှေ ပေါကျကွားသှားတယျဆိုတာ ဘယျသူမှ အတိအကြ မသိနိုငျသေးပါဘူး။
တကယျတမျးအားဖွငျ့ ဒီလိုဖွဈပကျြသှားရတာဟာ Facebook ရဲ့ အခကျြအလကျအသေးစိတျ မှတျတမျးတငျမှုကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ Facebook ဟာ အသုံးပွုသူတဈယောကျရဲ့ အမညျရငျး၊ မှေးသက်ကရာဇျစတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှအေပါအဝငျ အခကျြအလကျအမြိုးအစား ၇၁ မြိုးအထိ သတျမှတျပွီး ခှဲခွားမှတျတမျးတငျထားလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီအမြိုးအစားခှဲခွား မှတျတမျးတငျမှုမှာ Chat history တှေ၊ သှားခဲ့တဲ့ Check-in ဝငျခဲ့တဲ့ နရောတှေ၊ ဝါသနာ၊ အလအေ့ကငျြ့၊ ကိုးကှယျယုံကွညျမှုနဲ့ နိုငျငံရေးအမွငျစတာတှပေါဝငျပါတယျ။ ကာလရှညျကွာလှနျးသှားလို့ မရှိတော့ဘူးလို့ မမှတျယူပါနဲ့။ Facebook ဟာ အသေးအမှားအသေးစိတျအခကျြအလကျလေးတှကေအစ မှတျတမျးတငျထားတာပါ။ ဖကျြခလြိုကျတဲ့ Chat record တှနေဲ့ Search history တှကေ အစပါဝငျပါတယျ။ ဘယျလို Device တှေ သုံးတယျ၊ ဘယျလို Operation System တှေ သုံးတယျ၊ ဘယျ Browser တှေ အမြားဆုံး အသုံးပွုတယျဆိုတာမြိုးနဲ့ ခရီးသှားရငျ ဘာတှလေုပျတတျတယျဆိုတာမြိုးတှကေိုလညျး သူတို့သိရှိနပေါတယျ။
ဒီလို အသေးစိတျ မှတျတမျးတငျတတျတဲ့ Facebook ဆီကနေ အခကျြအလကျတှေ ပေါကျကွားသှားတာဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအရှုပျတျောပုံမှာ လူတဈဦးခငျြးစီကနေ ဘယျလောကျ အခကျြအလကျတှပေေါကျကွားသှားသလဲဆိုတာကို ဝိုငျးပွီးစိုးရိမျနကွေတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အသုံးပွုသူတှကေို အတနျအသငျ့ စိတျအေးစတောက Facebook ပျေါမှာ ရှိတဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျတှကေို ဥပဒကွေောငျးအရ ကာကှယျပေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ Facebook အနနေဲ့ လကျလှတျစပယျ အခကျြအလကျတှကေို မြှဝလေို့မရပါဘူး။ အခု ပွဿနာမှာဆိုရငျလညျး Cambridge Analytica ဘကျက အလှဲသုံးစားမှုလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရားစှဲဆိုခှငျ့ရှိနပွေီးတော့ တရားစှဲဆိုမှုတဈခြို့လညျး စတငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
Facebook ကတော့ ဒီဖွဈရပျအတှကျ မာ့ချဇူကာဘတျကိုယျတိုငျ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ တောငျးပနျစာတဈစောငျထွုတျပနျခဲ့ပွီးတော့ ဗွိတိနျက သတငျးစာကွီးတှဖွေဈတဲ့ The Observer၊ The Mail on Sunday၊ Sunday Times၊ Sunday Telegraph၊ Sunday Mirror နဲ့ Sunday Express တို့မှာ အဲ့ဒီစာကို စာမကျြနှာပွညျ့ကွျောငွာထညျ့သှငျးဖျောပွပွီး တောငျးပနျခဲ့ပါတယျ။
နညျးပညာလောကမှာ ဒီလိုပွဿနာမြိုးတှကေ ခုမှဖွဈပျေါလာတာမဟုတျပဲနဲ့ LinkedIn နဲ့ လူမှုရေးဖောကျပွနျသူတှအေသုံးပွုတဲ့ Ashley Madison တို့လို လူမှုကှနျယကျဝကျဘျဆိုကျမြိုးတှလေညျး အခကျြအလကျပေါကျကွားမှုမြိုးတှေ ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထူးခွားတာကတော့ Facebook နဲ့ Cambridge Analytica အရှုပျတျောပုံမှာတော့ Facebook ကိုယျတိုငျက အခကျြအလကျတှကေို ရယူခှငျ့ပွုသလိုဖွဈခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး အသုံးပွုသူတှေ တှေးနကွေသလိုမြိုး တကယျကို Facebook ရဲ့ အဆုံးသတျအခြိနျကို ရောကျပွီလား? Facebook ကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျရောကျပွီလား? ဆိုတာကတော့ ဖွဖေို့ ခကျနဆေဲဖွဈပါတယျ။
Tesla နဲ့ Mozilla တို့ကိုယျတိုငျ Facebook ကို သပိတျမှောကျလိုကျကွပမေယျ့ ဒါဟာ ယာယီသာဖွဈတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ WhatsApp ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Brian Acton က Facebook ကို စှနျ့ခှာရမယျ့အခြိနျလို့ ဆိုနပေမေယျ့ Facebook ကပိုငျဆိုငျတဲ့ Instagram ကိုတော့ ဆကျသုံးမှာဖွဈတယျလို့ ဆိုပွနျပါတယျ။
ကမ်ဘာ့လူဦးရေ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောကျ အသုံးပွုနတေဲ့ Facebook ကို စှနျ့ခှာဖို့ဆိုတာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှအေတှကျရော သာမနျအသုံးပွုသူတှအေတှကျပါ ပွောသလောကျတော့ မလှယျလှတာမွငျရပါတယျ။ Facebook ဟာ အသုံးပွုသူတှအေတှကျ တခွား Social Media တှထေကျ ပိုပွညျ့စုံတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ဖနျတီးပေးထားသလို ပိုကယျြပွနျ့တဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး ခြိတျဆကျပေးထားပါတယျ။ ဒီအခွအေနဟော ကွျောငွာရှငျတှအေတှကျလညျး လကျလှတျဖို့ ခကျခဲတဲ့ အခွအေနဖွေဈပါတယျ။
ဂယျလိုဝေးရဲ့ စာထဲမှာတော့ မီဒီယာတှေ၊ အစိုးရတှနေဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေိုယျတိုငျက Facebook ကို အလိုလိုကျအကွိုကျဆောငျမွှောကျပငျ့ခဲ့ကွသလို အကနျ့အသတျမဲ့ အရငျးအနှီးတှနေဲ့ စိတျတိုငျးကြ ခယျြလှယျခှငျ့တှလေညျး ပေးမိခဲ့တာကွောငျ့ ဒီအခွအေနကေို ရောကျလာတာဖွဈပွီး ခုတော့ သူတို့ကို ဇာတျကွိုးသတျဖို့ ခကျနပွေီလို့ ဆိုပါတယျ။
ဂယျလိုဝေးပွောခဲ့သလိုပဲ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှသောမကပဲ လူတှကေိုယျတိုငျလညျး Facebook ကို တကယျ့ဘဝရဲ့ တခွားမကျြနှာစာလို အသုံးခနြကွေတာကွောငျ့ စှနျ့ခှာဖို့ ခကျနလေိမျ့ဦးမှာဖွဈပါတယျ။
Tesla နဲ့ Mozilla လို နာမည်ကျော် နည်းပညာလုပ်ငန်းကြီးတွေက Cambridge Analytica အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Facebook ကို သပိတ်မှောက်လိုက်ကြပါတယ်။ Tesla ရဲ့ အကြီးအကဲ Elon Musk ဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကားကုမ္ပဏီ Tesla နဲ့ အာကာသသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း SpaceX တို့ရဲ့ Facebook page တွေကို ဖျက်ချလိုက်တဲ့အထိပါပဲ။ ဒါကြောင့် Facebook ဟာ သန်းဆယ်နဲ့ချီ Like လုပ်ထားတဲ့ Page တစ်ချို့ကို ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
Mozilla ကတော့ သူ့ Browser ပေါ်ကနေ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာမဟုတ်ပဲ ပိတ်ပင်ထားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျာမနီအခြေစိုက် Commerzbank နဲ့ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ Sonos တို့ကလည်း Facebook မှာ ကြော်ငြာမထည့်သွင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုထားကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် WhatsApp ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Acton ကလည်း #deletefacebook ဆိုတဲ့ Campaign ကို စတင်လိုက်ပြီးတော့ ဒါဟာ Facebook ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်လို့ ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က Youtube ကို ကြော်ငြာလုပ်ငန်း ၂၅၀ လောက်က သပိတ်မှောက်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒါဟာအဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှယ်ယာဈေးတွေထိုးကျသွားတာကြောင့် တစ်ပတ်ပတ်အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၇၅ ဘီလီယံလောက် ဆုံးရှုံးသွားတာကတော့ Facebook ကို အထိနာစေပါတယ်။
Cambridge Analytica ရဲ့ အချက်အလက်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုပြဿနာအပြင် စီးပွားရေးနယ်ပယ်က ယိမ်းယိုင်မှု အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာ Facebook သုံးစွဲသူတွေကတော့ Facebook အပေါ် ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာပြီးတော့ ဆက်သုံးသင့်မသုံးသင့် ဝိဝါဒကွဲစရာအခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအရှုပ်တော်ပုံ ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလောက်ကတည်းက စာရေးဆရာ စကော့တ် ဂယ်လိုဝေးက သူ့ရဲ့ The Four ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ Facebook ရဲ့ ဒီလို အချက်အလက်အလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်သတိပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Cambridge Analytica ရဲ့အချက်အလက် အလွဲသုံးစားမှု အရှုပ်တော်ပုံ ပ်ါပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာမှဖြစ်ပါတယ်။ Cambridge Analytica ဟာ ၂၀၁၆ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင် ဖောက်သည်တစ်ချို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချဖို့ Facebook သုံးစွဲသူ သန်း ၅၀ ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Facebook ရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ Facebook ပေါ်ကနေတဆင့် ‘personality test’ app တွေကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ‘personality test’ app တွေဆိုတာက မိမိဘယ် Celebrity နဲ့တူသလဲတို့၊ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ သေမလဲတို့၊ ဘယ်နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဆွေးမျိုးတော်စပ်လဲတို့လိုမျိုး Profile ကို အခြေခံပြီး အပျော်သဘောဝင်ရောက်စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ Facebook app တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကနေတဆင့် ဘယ်သူတွေ ဘာတွေကို လေ့လာပြီး ဘာတွေကို နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကို သူတို့က ခိုးယူမှတ်သားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ရွေးကောက်ပွဲအတော်များများနဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြန်လည်အသုံးချဖို့ ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကနေ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ပမာဏအထိ အချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိနိုင်သေးပါဘူး။
တကယ်တမ်းအားဖြင့် ဒီလိုဖြစ်ပျက်သွားရတာဟာ Facebook ရဲ့ အချက်အလက်အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ဟာ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ အမည်ရင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်စတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအပါအဝင် အချက်အလက်အမျိုးအစား ၇၁ မျိုးအထိ သတ်မှတ်ပြီး ခွဲခြားမှတ်တမ်းတင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးအစားခွဲခြား မှတ်တမ်းတင်မှုမှာ Chat history တွေ၊ သွားခဲ့တဲ့ Check-in ဝင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ၊ ဝါသနာ၊ အလေ့အကျင့်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာလွန်းသွားလို့ မရှိတော့ဘူးလို့ မမှတ်ယူပါနဲ့။ Facebook ဟာ အသေးအမွှားအသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေကအစ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ ဖျက်ချလိုက်တဲ့ Chat record တွေနဲ့ Search history တွေက အစပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်လို Device တွေ သုံးတယ်၊ ဘယ်လို Operation System တွေ သုံးတယ်၊ ဘယ် Browser တွေ အများဆုံး အသုံးပြုတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ခရီးသွားရင် ဘာတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း သူတို့သိရှိနေပါတယ်။
ဒီလို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်တတ်တဲ့ Facebook ဆီကနေ အချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားသွားတာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအရှုပ်တော်ပုံမှာ လူတစ်ဦးချင်းစီကနေ ဘယ်လောက် အချက်အလက်တွေပေါက်ကြားသွားသလဲဆိုတာကို ဝိုင်းပြီးစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသုံးပြုသူတွေကို အတန်အသင့် စိတ်အေးစေတာက Facebook ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Facebook အနေနဲ့ လက်လွတ်စပယ် အချက်အလက်တွေကို မျှဝေလို့မရပါဘူး။ အခု ပြဿနာမှာဆိုရင်လည်း Cambridge Analytica ဘက်က အလွဲသုံးစားမှုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိနေပြီးတော့ တရားစွဲဆိုမှုတစ်ချို့လည်း စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တောင်းပန်စာတစ်စောင်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပြီးတော့ ဗြိတိန်က သတင်းစာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ The Observer၊ The Mail on Sunday၊ Sunday Times၊ Sunday Telegraph၊ Sunday Mirror နဲ့ Sunday Express တို့မှာ အဲ့ဒီစာကို စာမျက်နှာပြည့်ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖော်ပြပြီး တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာလောကမှာ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေက ခုမှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ LinkedIn နဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ Ashley Madison တို့လို လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မျိုးတွေလည်း အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာကတော့ Facebook နဲ့ Cambridge Analytica အရှုပ်တော်ပုံမှာတော့ Facebook ကိုယ်တိုင်က အချက်အလက်တွေကို ရယူခွင့်ပြုသလိုဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အသုံးပြုသူတွေ တွေးနေကြသလိုမျိုး တကယ်ကို Facebook ရဲ့ အဆုံးသတ်အချိန်ကို ရောက်ပြီလား? Facebook ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလား? ဆိုတာကတော့ ဖြေဖို့ ခက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Tesla နဲ့ Mozilla တို့ကိုယ်တိုင် Facebook ကို သပိတ်မှောက်လိုက်ကြပေမယ့် ဒါဟာ ယာယီသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် WhatsApp ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Acton က Facebook ကို စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်လို့ ဆိုနေပေမယ့် Facebook ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Instagram ကိုတော့ ဆက်သုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက် အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook ကို စွန့်ခွာဖို့ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရော သာမန်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပါ ပြောသလောက်တော့ မလွယ်လှတာမြင်ရပါတယ်။ Facebook ဟာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် တခြား Social Media တွေထက် ပိုပြည့်စုံတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖန်တီးပေးထားသလို ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက်လည်း လက်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဂယ်လိုဝေးရဲ့ စာထဲမှာတော့ မီဒီယာတွေ၊ အစိုးရတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုယ်တိုင်က Facebook ကို အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်မြှောက်ပင့်ခဲ့ကြသလို အကန့်အသတ်မဲ့ အရင်းအနှီးတွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်ခွင့်တွေလည်း ပေးမိခဲ့တာကြောင့် ဒီအခြေအနေကို ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ခုတော့ သူတို့ကို ဇာတ်ကြိုးသတ်ဖို့ ခက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဂယ်လိုဝေးပြောခဲ့သလိုပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသာမကပဲ လူတွေကိုယ်တိုင်လည်း Facebook ကို တကယ့်ဘဝရဲ့ တခြားမျက်နှာစာလို အသုံးချနေကြတာကြောင့် စွန့်ခွာဖို့ ခက်နေလိမ့်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ Social Media အခနျးကဏ်ဍ (၂) ~ ရေ...
ဘဝဆိုတာ ခဲဖျက်မရှိတဲ့ ပန်းချီဆွဲခြင်း တမျိုး။ Life is the art of drawing without an eraser. (John Gardner) ဘဝဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေလိ...
8 水疱瘡 - If you are searching about 大人の水疱瘡日記（写真付き） you've visit to the right place. We have 8 Pictures about 大人の水疱瘡日記（写真付き） like 水疱瘡 : 四十路わーるど☆彡, 帯状疱疹 症状 | 帯状疱疹の症...